Gịnị mere m lụrụ a White Girl — njem Lee - Official Site
Ụfọdụ dịghị mgbe ọ ga-atụle ịlụ onye na-abụghị otu agbụrụ ka ha, ya mere, ka m kọọrọ gị ihe mere m ji mere.
Ikwu eziokwu, Mgbe m na-atụ anya ịlụ di na nwunye a na nwa nwaanyị. M hụrụ nwaanyị nke nzụlite nile mara mma, ma nwa ya nwanyị dị m "mmasị." Ma mgbe m rutere m na mahadum campus na 2006, M na-adịghị achọ nwunye mgbe nile. M nnọọ chọrọ na-eto eto na okwukwe m ma na-ezi muta. My mbụ album ama dị nnọọ pụta, otú m nwere ọtụtụ ihe ndị ọzọ na-eche banyere. Ma ka m zutere mmadụ n'ụlọ akwụkwọ, a sophomore aha ya bụ Jessica n'ezie jidere m anya na anyị ghọrọ enyi.
Anyị gbara ọsọ ke otu okirikiri na anyị bịara na esonye n'otu chọọchị, otú ahụ ka anyị hụrụ onye ọ bụla ọzọ a otutu. Na ihe m matara ya, ndị m na-erukwu ya. Ọ n'ezie n'anya Jesus na o nwere a childlike njikere ime ihe ọ bụla Ọ gwara. Ya ọmịiko n'ahụ ndị nọ ná mkpa aka m na o nwere a umeala n'obi na zara Okwu. N'ime na afọ mbụ, M na-ele ya àjà ọtụtụ awa nke oge ya na-eje ozi na chọọchị anyị. On top of niile nke na, M imere ya gburugburu ya. mkparịta ụka anyị, ma oké njọ ma ọ bụ enweghị isi, mgbe niile asọpụta na ala. N'ihi ya, m mesịrị malite ịjụ onwe m, "Ọ bụ m ịlụ di na nwunye a girl?"
Jessica-adịghị anya ka m na-atụ anya m ga-eme n'ọdịnihu na nwunye anya, ma ihe n'eziokwu na dịghị ihe o mere ka m. Unu ga-esi m na-ezighị ezi, M chere na ọ mara mma si ụbọchị mbụ m hụrụ ya. Na m na-agaghị na-emegide ịlụ a na-acha ọcha girl. M nnọọ chere na ihe m ga-. Ma, dị ka m na-eto m okwukwe na obi m gbanwere, m mmasị malitere agbanwe kwa. My isi mmasị bụ na nwunye m na-amasị Chineke, na Jessica bụ. N'ihi ya, m wifed ya.
Mgbe maka oge mere Ọ dị m ka e edozi. Ọ na-adị ihe dị ka akwụkwọ dozie leghara a Chineke nwaanyị abụghị nanị n'ihi na ya agbụrụ. M na-achọghị m kpọrọ ihe preferences n'ihi na a na nwunye ya banyere ihe m mkpa na a na nwunye.
E nweghị ihe ọ dị njọ na-enwe mmasị, ma anyị nwere jide ha jiri aka. M ma ụfọdụ ndị na-eleghara a nwere Chineke ma ọ bụ nwunye n'ihi na ha adịghị dabara ụfọdụ random mmasị. Ụfọdụ n'ime anyị mmasị n'ezie enweghị ihe o na ọtụtụ. Ụfọdụ n'ime anyị mmasị pụrụ ọbụna ịbụ nzuzu, otú anyị nwere ike nyefee ha nile na-Akwụkwọ Nsọ.
Mgbe ị na onye òtù ọlụlụ gị nọ n'etiti ogu, akpụkpọ ụda dịghị mkpa. Isi ụdị na-elekọta mmadụ ọnọdụ iyi ihe dị nta. Ị chọrọ ha ka ha bụrụ Chineke ma dị umeala n'obi. Na dị ka mụ na nwunye m na-amalite ịkwa anyị mbụ nwata, M nwere ike ịbụ ihe ọzọ ụtọ na o. Ọ bụ ihe ịtụnanya na mama a Chineke mmetụta nwa m-ma nke nwere ihe ọ bụla na-eme ya agbụrụ. Ọ bụ OK na-achọ ihe na a na nwunye, ma anyị nwere iji nyefee anyị ọchịchọ ihe Chineke chọrọ ka anyị na a na nwunye. Ihe m chọrọ na mkpa kasị bụ Chineke na onye òtù ọlụlụ, na nke ahụ bụ kpọmkwem ihe Chineke nyere.
CLL • October 31, 2013 na 1:50 pm • zaghachi
Ọma we Njem. My di bụ White na m Black na m mgbe niile na ina-jụrụ ya ihe mere m họrọ onye na-abụghị nke m mba. M zaghachi mgbe nile na Chineke kere oke maka m na O mere dị ịtụnanya ọrụ, mma karịa m mgbe nwere ike mere na m. Chineke dị mma! Nọgidenụ na-eme ihe ị na-eme! 116! Jesus mbụ ruo mgbe anyị na-na na n'okpuru ụwa!
Ericka • November 17, 2013 na 8:59 Abụ • zaghachi
Daalụ maka ime ihe n'eziokwu Njem Lee. ekwenyere m. Ị nwere ike a mmasị ma na ị nwere jide ya na ihe na-emeghe n'aka n'ihi na dị ka a Christian gị mbụ nkwa bụ na Kraist na onye òtù ọlụlụ gị na-akwado na. evenly yolked…
Wadsworth • January 2, 2014 na 3:52 Abụ • zaghachi
Great post Njem.
M nwere nsogbu ị na-elele gị blog na ekwentị m. The peeji nke yiri ofu igbochi ekpe-nri ịpịgharị na okwu na njedebe nke ọ bụla akara yiri ebipụ m na ihuenyo ya mere m mgbe ụfọdụ nwere ike ime echiche nke ụfọdụ ahịrịokwu. M na na na na ma ọ bụrụ na nke a bụ a nsogbu na m nchọgharị ma ọ bụ ma eleghị anya, a teknikaliti na blog si Mbido. Dị nnọọ chọrọ iji mee ka ọ dị incase ihe nwere ike mere site na ọgwụgwụ gị.
-anọ gọziri agọzi.
Maria • January 10, 2015 na 8:10 pm • zaghachi
Nwa m nwaanyị hụrụ gị music. n'ezie, M ga-ekweta; M na-eme kwa:). Mgbe mbụ ọ ẹkenam m ịgagharị music na anyị na ndị ọzọ ọkacha mmasị, lacris) M bụ nnọọ otú ọṅu n'ihi unu na-atụ egwu Chineke mmetụta site na gị music. Ma m nọgidere na dịtụ njikere. Eche na ọ bụrụ gị music gosipụtara gị agwa. Agụ nke a Obi siri m ike na ị bụ Chineke na mmadụ. M ekpe ekpere ọtụtụ ọtụtụ ngọzi n'ihi na gị mara mma na nwunye ezigbo mma nwa. Onwe na-ekwu okwu, na na a oge bụ ebe e nwere ọtụtụ ihe ọjọọ, agbụrụ dị na. Otu bụ n'ezie ihe ndabara ọma na-enwe a na nwunye (ma ọ bụrụ na ị bụ nwoke) Onye hụrụ Jizọs na-eje ozi Ya nri tinyere n'akụkụ gị nke.
Adam Craven • January 26, 2017 na 10:24 Abụ • zaghachi
Amen!!! Ọ dịghị mgbe m ghọtara ihe mere ụfọdụ ndị mmadụ eleghara anya a Chineke nwaanyị nanị n'ihi na ha dabara n'ime otu nke ha mmasị. M nwere a nwanna nwanyị bụ onye ọ fọrọ nke nta na-etinye a mmasị n'ihu obi ụtọ. O mechara gaa ebube okwu Chineke ma na-ekpe ekpere banyere ya ma kpee ekpere na n'ikpeazụ ọ wee ya azịza na m ugbu a 2 nieces na a oké chi-atụ egwu na nwanne na-iwu!! Ọ dịghị mgbe ị ga-etinye gị na mmasị n'ihu Chineke n'ihi na oge ọ bụla onye na ha na-ihu ọma etap ke chi ihu na m mmasị tupu ị!!
Nahledge • October 31, 2013 na 1:52 pm • zaghachi
Michael • October 8, 2014 na 4:48 Abụ • zaghachi
Alexis • October 31, 2013 na 1:54 pm • zaghachi
Ka a mma akụkọ ịhụnanya karịa chi ojiji.
Daniel Troutman • October 31, 2013 na 2:51 pm • zaghachi
Tam • October 31, 2013 na 3:36 pm • zaghachi
Ụbọchị nile a mma akụkọ ịhụnanya karịa Twilight.
ọ • October 31, 2013 na 6:23 pm • zaghachi
ezi ya :)
aganụ • October 31, 2013 na 1:54 pm • zaghachi
Carina • October 31, 2013 na 1:54 pm • zaghachi
Dị ka Chineke na-eduga, anyị kwesịrị ịgbaso. M na-eche Bible na-ekwu okwu bụ na anyị nile otu agbụrụ, mbụ si Adam na Iv mgbe e mesịrị niile ụmụ Noah. Ọ nwere ike iwe ọtụtụ puku afọ na narị ọgbọ na-azụ, ma anyị niile malitere site n'otu ebe. otu ọsọ, ọtụtụ ethnicities.
Britta • October 31, 2013 na 1:55 pm • zaghachi
Ekwetara m! Tupu m zutere di m mgbe m na-họọrọ dị ọcha akpụchasị red isi, ma mgbe ahụ, m zutere David. Ọ bụ a nkwọcha Ihọd na a goatee ogologo ezuru m na ikpa isi! Ọ bụ / bụ ihe niile Chineke kwere nkwa m na m ga-ahụ na a di, ma ọ bụrụ na m nọ nnọọ na-achọ a na-anya m gaara funahụrụ ihe kasị mma Chineke nwere maka m!
David B • October 31, 2013 na 1:56 pm • zaghachi
M na-ekele nke a. M cant chere til ihe bara uru, nke a bụ otú anyị na-eme amara ke everyday, akwụkwọ na-cowritten site Njem na Jessica!
Inan • October 31, 2013 na 1:57 pm • zaghachi
Daalụ Njem a dị ịtụnanya isiokwu. -Eme ihe n'eziokwu na ị na-, M mara mma anya mgbe m chọpụtara banyere nwunye gị mba. ma, M kwere na Chineke atụmatụ maka ndụ anyị, ọ bụghị mgbe niile dakọtara ihe anyị na-atụ anya ma ọ bụ chọrọ. Ya mere,, isiokwu a enyeworo m aka ekpe ekpere ma na-m ji nri; n'ihi ya, mgbe ahụ onye obi anaghị abịa tinyere ụzọ m, Chukwu kwado, Adịla m njikere. Daalụ ọzọ dị egwu. N'anya gị na fam na Jizọs. Chukwu gozie.
Rachel • October 31, 2013 na 1:57 pm • zaghachi
Chaị. Obi dị m ụtọ maka gị oghe, na-eme ihe n'eziokwu obi banyere isiokwu a, dị ka m n'aka na ọ bụghị na-agwa okwu ezuru! Mụ na di m bụ otu “agbụrụ” ma m nwere ike ịhụ nke a otu eneni n'elu-enweghị isi na ihe dị ka someones ọnọdụ (ụdị ọrụ ha nwere), ma ọ bụrụ na ha nwere ụmụ, ihe ha gara aga kemgbe, n'agbanyeghị nke wether ha nọ Christ ma ọ bụ na. M imọfiọk m ga na-na na di na nwunye di m n'agbanyeghị ya agbụrụ, ọnọdụ, ma ọ bụ ndabere. Ịhụnanya Chineke na amara na-ekpuchi n'elu ihe nile na-eme ka ọ niile ọhụrụ na ndị mara mma. Na dị ka i kwuru, Ọ maara ihe dị anyị mkpa karịa anyị na-eme onwe anyị. Daalụ maka nke a post!!
Paul • October 31, 2013 na 2:00 pm • zaghachi
Nke a bụ…. gwakwara.
Crystal • October 31, 2013 na 2:01 pm • zaghachi
mara mma zuru oke. M n'anya na ị kwuru banyere otú mmasị gị gbanwere mgbe gị na-ebute ụzọ gbanwere. Chineke bụ egwu, O nwere ihe ndị kasị mma ọ bụla n'ime anyị ma anyị kwesịrị pụọ nke anyị ụzọ ka anyị nwee ike ịhụ, enweta na-enwe ekele maka ha. M a nwa nwanyị na-agbasaghị banyere agbụrụ. Ekpere m bụ ịhụ ka ndị mmadụ dị ka Chineke na-ahụ ha na-eje ije na uche Ya. Ọ bụ ya. Ọ bụ Onye kere anyị, bụ ndị anyị na-na-akpa ókè agbụrụ?
diya • October 31, 2013 na 2:02 pm • zaghachi
Great blog na ndị mmadụ mkpa na-agụ. M agbaso n'ife ofufe Armenian na di m bụ nwa na anyị wee site na-aga site na a ọtụtụ nke iru újú ezinụlọ m.
Ọ dịghị mgbe m nwere a mmasị nke agbụrụ. N'ihu m zọpụta m nwere 3 oké njọ mmekọrịta nke dị iche iche agbụrụ na mgbe m malitere zọpụta na-eto na mmekọrịta mụ na Kraịst ọ bụ ihe niile banyere onye m “akpọ” na-na; onye Chineke nwere “họpụtara” maka m.
Na-eto eto na ọ bụghị nke ukwuu a mmasị ma a chọrọ site na ezinụlọ m ịlụ di na nwunye n'ime m agbụrụ ma m ịma; M mgbe niile weere nwa atụrụ na agbanyeghị…
Iji m niile na mkpa bụ ihe Jehova bụ uche maka ndụ m na mgbe di m na-kpugheere m na m nwere ndị dị otú ahụ a na udo na ndị dị otú ahụ a maara na m guzo n'ala m. Anyị ka na-ekpe ekpere maka ezinụlọ m obi ịrọ arọ ma n'ikpeazụ niile na mkpa bụ na m nọ uche Chineke na ụzọ ya na e nweghị ebe ọzọ m chọrọ be..I onwem enem uche Ya.
Michael • October 31, 2013 na 2:03 pm • zaghachi
Nke a bụ oké post Njem. Dịtụbeghị mgbe m chere mmasị m agbụrụ, Hispanic, ma dị ka m na toro ọzọ na okwukwe m, ọ ghọwo ihe o ka m na akpụkpọ ụda dịghị mkpa ka ukwuu. Nke a na-enye ume ọhụrụ na-agụ ma m na-ekele Chineke na o nyere gị otú ahụ a oké nwaanyị aka ị na-anọgide na-eto Ya. Daalụ maka mmụọ nsọ niile ozi gị!
Jarred • October 31, 2013 na 2:03 pm • zaghachi
Mụ na nwunye m na-na-acha ọcha ndị mmadụ. Jehova kewapụrụ anyị n'ime doo maka nwa mbụ anyị. Na na usoro ị nwere ike họrọ ihe ị chọrọ. Ọ fọrọ nke nta ka ịchọpụta a nwa nkita. Agbanyeghị otu n'ime nhọrọ ndị ị na-esi na-eme bụ maka agbụrụ. Anyị na-enweghị nsogbu ọ bụla mba, Otú ọ dị, ebe m si ha kpọrọ asị nwa ndị mmadụ. Ya mere, anyị họọrọ bụghị ịmụta a nwa nwa n'ihi ha na ụzọ ahụ ha na a ga-emeso mgbe anyị weere ha azụ ahụ m nne na nna ochie. M na-mgba na-ahọrọ. Ndi anyị na-eme ihe ziri ezi? Na anyị na-na-echebe nwa anyị si na-akpọ asị, ma ọ bụ na-na anyị na-akpọ Chineke ná ndụ anyị? Anyị na-ala na na na-ahọrọ ugbu a, n'ihi na ọ bụ n'elu, ma gịnị ka ị na-eche?
DeeDee • October 31, 2013 na 6:26 pm • zaghachi
M na-agụ gị post… M na nwa, na e kuchiri m nne na nna bụ ọcha. Ọbụna ọkàikpe-ekpe ikpe ahụ bụ nwa. Mama m na papa m bụ ụjọ n'ihi na anyị bi na mpaghara ebe m na m otu n'ime ndị ọzọ nakweere ụmụnne ghara e dị ka na-eche nche site ndị mmadụ ajọ mbunobi. Na na-ekwu, ha tụkwasịrị obi Chineke, na mgbe zutere ọnọdụ nke nchegbu.
M na-eche ma kwere na gị na nwunye gị mere ihe kasị mma n'ihi na gị na ezinụlọ gị. N'ọnọdụ nke ọ bụla bụ ihe pụrụ iche na Chineke na-enye anyị ọtụtụ nke amara ịnyagharịa ndụ obere na nnukwu oge. -ume! Onye ma, ma eleghị anya, ị ga-enweta ohere ịmụta ọzọ na-ahọrọ a black (ma ọ bụ ndị ọzọ agbụrụ) nwa! Chineke maara obi unu mgbe, na ọ maara na ọ ọbụna oge a.
Cece • October 31, 2013 na 7:51 pm • zaghachi
M na-abịa site a na ezinụlọ ebe m na-acha ọcha nne na nna kuchiri 6 black ụmụaka. Echere m na ọ bụ eziokwu n'ihi na unu niile na-n'ezie na-aghọta na n'ịkpa n'èzí gị mba pụtara na ị ga-abụ nnọọ kpachaara anya banyere ikwe ka nwa gị na-enwe ha na omenala, na ịchọpụta ha blackness. Ọ bụrụ na Chineke n'ezie na-akpọ gị na-achụso azụ a black nwa, mgbe o kwesịrị ịbụ na mfe nwere gị na ezinụlọ gị mmetụta gị nke na mkpebi. Otú ọ dị, ajụjụ dị mkpa ka a jụrụ, bụ mkpebi ịmụta ihe banyere m, ma ọ bụ nwa onye kwesịrị a home? Enwere m ike ịtachi obi niile backlash si enyi na ezinụlọ na-abịa na otú a na nwa n'èzí m mba? M na-atụ anya na nwa ga-akpọlite ​​na a n'ụzọ na-amanye ha ka ha na-enye elu ndị ha na-enwe na a so na ezinụlọ m? Ga-m na-ahapụ ohere maka nwa m na-enwe ike mgba site na ha njirimara nke bi n'etiti ụwa? Na-otu guzobere n'ụzọ na-agọzi ihe mmasị nke m na-na-acha ọcha onye ịmụta n'elu ezi mkpa nke nwa? Olee otú ụkpụrụ a doo usoro?
N'ịkpa a nwa pụtara a dum mindset mgbanwe, na n'ụzọ anụ ahụ na-akwaga ebe ma ọ bụrụ na na gburugburu ebe obibi na ị na-anaghị amara nwa gị mkpa. Mmekọrịta ga-mkpa a ga-ewu ya na ndị na-abịa site a lee ya anya na ị gaghị n'ụzọ zuru ezu ịbara na (ịbụ nwa). Anyị bi a akpa ókè agbụrụ ụwa, na a ga-mere ka maara site na gị na nwa ị na-eweli. Ọ bụrụ na ị họọrọ na-adịghị aghọta na, mgbe ị na-na ọtụtụ ụzọ na-eme a egbu onwe gị na nwa gị ịmụta. Nkuchi bụ banyere gị na-na-anapụta ogbenye nwa nwa. Ọ bụ ihe ị na-akpali nke a ebe nke ịhụnanya na n'ezie bi obi nke gospel ịghọta na agbata obi gị n'anya. Nke a abụghị ihe ị, dị ka a na-acha ọcha onye.
N'ọtụtụ ụzọ ndị a bụ nanị ole na ole ajụjụ dị mkpa ka ị ga-abịakwutekwa. Ọ bụrụ na ị na-adịghị njikere ịtachi obi a na ọtụtụ ihe ndị ọzọ, mgbe bụghị n'ịkpa a black nwa ahụ eleghị anya a ezigbo mkpebi. M gwa otu isiokwu n'okpuru na-enye gị na-ajụ ihe ndị a na a miri ụzọ site n'ịgwa mba n'ime mkparịta ụka, na-na a hụperetụ nke adoptees na ahụmahụ ha.
Ọ bụghị ọ bụla akụkọ bụ a ịga nke ọma akụkọ na-emekarị n'oge ndị na-abụghị akụkọ na-anụ. M ihe ndabara ọma na m ahụmahụ na ezinụlọ m. N'ọtụtụ ụzọ, M e nyere na ọtụtụ ohere inyocha onye m na ọtụtụ ohere, Otú ọ dị, Amaara m na ọ na-abịa na a na-eri na anyị kwesịrị ịhapụ ohere maka na ka na-ekwu banyere.
Kara • October 31, 2013 na 2:05 pm • zaghachi
HAHA! “My isi mmasị bụ na nwunye m na-amasị Chineke, na Jessica bụ. N'ihi ya, m wifed ya.” Best akara na blog. Obi ụtọ na Chineke na-edu gị a oké na nwunye. :)
John Evangel • October 31, 2013 na 2:08 pm • zaghachi
Ogologo oge na-agụ & na-ege ntị. Oge mbụ commenter. M n'anya n'ezie n'isiokwu a.
My ezinụlọ bụ Nigerian, na papa m zitere m a random ederede otu Tuesday ụtụtụ 4am si “Ọ bụrụ na ị chọrọ ka ọdọ, jide n'aka ya onye si na otu ndabere dị ka ị na-. na ọtụtụ, otu mba.”
N'ezie, M na-amaghị ihe na-ekwu, n'ihi na anyị na mgbe na-atụle nke a tupu. #ihere.
Amaara m na m ga-n'anya na nwunye m, Mgbe m dịkwa njikere, n'agbanyeghị nke odidi, n'agbụrụ, asụsụ mgbochi, na ihe ọ bụla ọzọ pụrụ iche. Ihe kasị mkpa m bụ na ọ bụ ihe akụkụ nke ezinụlọ m – N'ezinụlọ Chineke. Nke ahụ bụ ezu.
Tilda • October 31, 2013 na 6:37 pm • zaghachi
Hahaha. Naija nne na nna ike siri na alụmdi na nwunye . Ma ụfọdụ dont elekọta onye ị lụrụ di na nwunye
QuentinLawson • October 31, 2013 na 2:09 pm • zaghachi
“Eguzo”… “na-akụ aka”….
enyi • October 31, 2013 na 2:12 pm • zaghachi
Daalụ maka ekere òkè gị obi Njem. Anyị niile bụ otu ihe ahụ mgbe anyị na-eyipụ akpụkpọ. Chineke kere onye nke ọ bụla dokwara na iche dị ka ya pụrụ iche imewe. Chineke na-agọzi gị na ezinụlọ gị.
JoshHaan • October 31, 2013 na 2:12 pm • zaghachi
Ọ dịghị ihe na-ezighị ezi dị ka i kwuru Njem banyere ịlụ onye nke a dị iche iche agbụrụ. Ihe dị mkpa bụ na onye, ​​mgbe unu ma ọ bụ na m ịlụ di na nwunye na ha hụrụ Jizọs n'anya (Mark 12:30 ESV) na na ha ga-ahụ gị n'anya azụ na na anyị hụrụ ya dị ka Chineke hụrụ ndị Church. Chineke na-agọzi gị njem na ezinụlọ gị
MichaelJ • October 31, 2013 na 2:13 pm • zaghachi
Awesome mmebi nke otú Jehova bụ mgbe niile na-agbanwe agbanwe “anya nke obi anyị” ka mmezi na “anya isi anyị”. M nwere ike ikwu na ihe ịma aka, ọ bụ ezie na m na-abụghị di na nwunye ma, n'ihi na a na-asọpụrụ Chineke nwaanyị nke nwere a chọrọ ime ya Onye-nzọpụta dị mkpa karịa ihe ọ bụla atugharị àgwà. Ekele na ị niile bụ afọ ka Chineke nọgide na-agọzi ndị ọzọ.
JB • October 31, 2013 na 2:17 pm • zaghachi
M na-anụ na ị na njem, mma post.
Virgil • October 31, 2013 na 2:17 pm • zaghachi
M chọrọ ka m nwere ike ịlụ di na nwunye a na nwa nwaanyị!
Nolan • October 31, 2013 na 2:18 pm • zaghachi
Daalụ maka post! N'ezie ume gị blog, n'ike mmụọ nsọ m ka m na-amalite m! ekele.
OJ • October 31, 2013 na 2:25 pm • zaghachi
Nice post!! ekele
Arthur simuchile • October 31, 2013 na 2:25 pm • zaghachi
Anyị niile nwere otu nna ma iche iche nne otu ọbara Jizọs na-agba na anyị,anụ bụ nanị akpụkpọ,ma ihe bụ ihe dị anyị n'ime kasị mkpa ,wonderfull Mr Njem Lee.may Chineke na-agọzi gị na ezinụlọ gị maka gị wonderfull n'ike mmụọ nsọ.
deidreBaker • October 31, 2013 na 2:29 pm • zaghachi
Chaị! M na-amaghị na ị lụrụ di na nwunye na ọ bụ a na-acha ọcha inyom, dị ka a nwa inyom na a inyom nke Chineke, congrats na-achọta ezi ịhụnanya! M n'anya otú ị kọwara ihe mere na ị lụọ nwunye gị, na ị na-enweghị oke, ma ị akụkọ bụ ịtụnanya! gị otú ahụ nwanne na gị mîkemeke nwunye Jessica, M na-achọ unu ọtụtụ ọtụtụ afọ! A Gọzie!
Elizabeth • October 31, 2013 na 2:31 pm • zaghachi
Ị na-eme a magburu onwe ebe! M nwere na-amụta site gị n'isiokwu na ọ dịghị mkpa banyere akpụkpọ ụda ma ihe dị mkpa bụ otú ndị mmadụ na-eje ije na Chineke na ha Heart!! Daalụ maka na-ekere òkè a mara mma akụkọ.
Jimmy Sorrells • October 31, 2013 na 2:32 pm • zaghachi
Na-eme ka n'ụzọ zuru okè,. Gịnị ka ihe amamihe bụ ịkpa ókè agbụrụ. Ebe e nwere nanị otu agbụrụ, na-akpa ókè agbụrụ bụ na-megide agbụrụ mmadụ. E nwere dị iche iche ndị mmadụ dị iche iche ma ọ bụ nanị otu agbụrụ ma nke a yiri ka a adịkwa esemokwu ndị m na-atụle ya n'agbanyeghị ya eziokwu.
Timo • October 31, 2013 na 2:33 pm • zaghachi
Great post, njem!
JeffreyCravens • October 31, 2013 na 2:34 pm • zaghachi
“M na-achọghị m kpọrọ ihe mmasị na nwunye n'elu ihe dị m mkpa na a na nwunye.”
Ndị dị otú ahụ a ezi na gbaa ọkpụrụkpụ. My nna bụ nwa, nne na-acha ọcha, ha na e lụrụ di na nwunye 35 afọ. Na ụfọdụ ike ike afọ oke ma n'etiti ndị agha, “akpụkpọ ụda” kasị maa dịghị ihe o mere. Jehova anọwo na-eme amara, na-ekwesị ntụkwasị obi.
njem, a post na-enye ume ọhụrụ dị egwu. M a izu n'ebe aṅụrị m n'afọ mbụ nke alụmdi na nwunye a na-asọpụrụ Chineke na nwunye na-aka m kwa ụbọchị na ya ọmịiko. Ọ na-eme ka ha na Latin, french na Hawaiian ezigbo. Ya mere, ọgụgụ nke a ka e ukwuu ekele.
Daalụ ọzọ, Jeff.
Walter • October 31, 2013 na 2:34 pm • zaghachi
i na-eche otu ihe ahụ na-eche n'èzí igbe ana m nwa m na-achọ ịlụ di na m mba ma i nwere ihe mere m ji m na-amasị ndị ọzọ di iche iche nke ndị inyom
Michelle • October 31, 2013 na 2:35 pm • zaghachi
Daalụ maka na-ekere òkè na-awụfu ìhè na nke a. ma ọcha, black, etc na ị na na otụk na ihe dị mkpa n'ezie. The spirit nke ịkpa ókè agbụrụ na-egbochi anyị, ruo ogologo oge na a otutu ebe. M kwere na anyị na-na-agbasa site na o sina. Chukwu gozie gị & gị na-eto eto na ezinụlọ.
ChevyThompson • October 31, 2013 na 2:36 pm • zaghachi
yiri m akụkọ. ekele 4 ikenye
Bachizzle • October 31, 2013 na 2:37 pm • zaghachi
M nwere a echiche, M a nwaafo american ( India) M na-ahụ ya otú i nwere na-eme njem. M na-amụ na Southern sem. na ndị mmadụ na-ajụ m mgbe ị na-aga ịlụ di? M na-eme na “mgbe oge ziri ezi na m nri”. M na-eme na-anya m na-emeghe ma i na-ekwu “i chọrọ a Chineke na nwunye na-ga-abụ otú na ịhụnanya na Jizọs na ọ ga na-asọpụrụ ya na okwu ya”. Na agbụrụ nke anaghị abịa ma i na-ekwu na ọ bụ ike chọta a nwunye na-asọpụrụ Jizọs bụ okwu onye bụ nwa afọ american ka m n'ihi na nke omenala akụkụ na mmetụta nke pentacostalism na matriarchial usoro na nwa afọ american omenala. Daalụ maka gị okwu
Cori ः • October 31, 2013 na 2:37 pm • zaghachi
Atọ m ezigbo ụtọ na-agụ nke a post Njem. M nnukwu onye ofufe nke gị, ma na-amasị m nke bu eziokwu na ị na-emeghe banyere nke nke agbụrụ. -eme ihe n'eziokwu, agbụrụ ga mkpa mgbe ọ na-abịa na ndị anyị ịlụ. Nanị ihe na-ga mkpa bụ ma ọ bụrụ na ha bụ ndị a Christian, na ọ bụrụ na ha na-kwekọọ na uche Chineke maka ndụ gị. Mpụga nke dị mkpa, agbụrụ ma ọ bụ ụcha akpụkpọ ahụ bụ nnọọ a dị iche na otú anyị anya. M dere na mpụga nke m mba. M nwa na m ex bụ Korean / White. Ọ dịghị mgbe ọ na esemokwu anyị, ma m na-echeta mgbe anyị anyị na-enweta site n'aka ndị ọzọ stares. Ọ bụ ihe na-akpali ahụmahụ, ma onye ọ bụla nke negativity (nke bụ na ọ bụghị ọtụtụ) ga-akwụsị m si na-akpa onye ọzọ na-abụghị nke m agbụrụ ma ọ bụ ịlụ ha. Nke ahụ bụ mgbe otu ihe iseokwu na m, ezinụlọ m ma ọ bụ enyi. Na-ekwu bụ, na anyị nile nwere mmasị, ma anyị kwesịrị ilekwasị anya n'ihe Chineke chọrọ maka ndụ anyị mbụ. Nice ịhụ na mkparịta ụka a bụ mma.
Paul • October 31, 2013 na 2:40 pm • zaghachi
Ọ bụ n'ebe a onwe ụzọ anyị ga na-ekwurịta ihe a nke, dị ka m na ị.
ọchị • October 31, 2013 na 2:46 pm • zaghachi
Ana m ekele Chineke na i dere isiokwu n'ihi na dị ka otu Christian inyom, M na-aghọta na ọ dị mkpa na-n'ụzọ zuru ezu na-emeghe ka ihe Chineke kwuru, tinyere onye ọ na-enye ohere na-abịa na ndụ gị na ọbụna na-ewe site na ya. Obi dị m ụtọ maka okwu ahụ i mere “anyị nwere n'okpuru ọchịchọ anyị ihe Chineke chọrọ ka anyị na a na nwunye”. Nke a n'ime onwe ya na-enyere m na-emechi anya m si eche echiche na-aghọta na iji lekwasị anya ihe Chineke chọrọ ka m na ndụ m. M na na na na preferenced nwa ikom; Otú ọ dị Chineke na-arụ ọrụ na obi m na-na ebe ebe ọ bụ na m na-amalite na-achọ ya na ekele na a na-asọpụrụ Chineke di. Chee echiche banyere otú ọtụtụ ndị na-ahọrọ ihe ndị na-ezighị ezi onye na-alụ nwunye ma ọ bụ ọbụna na-atụ uche si na onye Chineke nwere maka ha nanị n'ihi na ha na mgbochi / preferences. Great isiokwu! Ọ n'ezie gọzie m na m n'aka na ọtụtụ ndị ọzọ.
skateboard • October 31, 2013 na 2:48 pm • zaghachi
Ndị sitere South na biracial, M na-mesoo esemokwu banyere agbụrụ mkpakọrịta nwoke na nwaanyị a ọtụtụ. M nwere ike na-aga ịbụ a mara mma nwa Chineke ka ihe ụfọdụ tụlee a ndudue ma ọ bụ a na-eweda n'ala okwu. Preciate ị na-ekwu okwu si na nke a! Olileanya na di m bụ ka ịnakwere nke m dị ka gị na nwunye nke ọ bụla ọzọ! 116!
JON • October 31, 2013 na 2:50 pm • zaghachi
Good post i na-eche na a ọtụtụ ugboro na ọ bụghị ihe mkpa na anyị na-ahọrọ otu na agba ma ọ bụ agbụrụ, ya bụ ihe ị na-eji. Site ị na-a Christian na-ekwe ka Chineke na-emeghe anya unu ị hụrụ gị ihe ọma. Congrats dị egwu.
Gozie • October 31, 2013 na 2:51 pm • zaghachi
Ricky • October 31, 2013 na 2:52 pm • zaghachi
Great post Njem! E nweghị ụlọ na gospel maka ịkpa ókè agbụrụ.
Daniel Troutman • October 31, 2013 na 2:53 pm • zaghachi
M na-eche na ọ bụ mma ma na ọgụgụ isi nke ị dee ihe a post. Ọ na-enyere ndị mmadụ na ịhụnanya amaghị ihe na-enweghị ige dị ka agbụrụ ma ọ bụ mba. 1 Ndị Kọrịnt 13 ekwughị ihe ọ bụla banyere agbụrụ; O kwuru okwu banyere ndidi, ịdị umeala n'obi, na amamihe. Big acha ọkụ maka oké post!
ga- • October 31, 2013 na 2:53 pm • zaghachi
Right on! Nke a bụ ngọzi. M na a na jụrụ, hụrụ emechu ihu ihu, na m na na na nụrụ folks ekwu okwu mere / otú m biri ma ọ bụ ghọrọ “pịa”. Ekpere m ekpere maka a-atụ egwu Chineke nwaanyị na O zigara m ya. M n'anya na nwunye m na-eme ka na-acha ọcha (M na nwa). ọ & ụmụ anyị ndị m kasị ukwuu ngọzi si n'aka Chineke, m na-agaghị achọ ya ọ bụla ọzọ ụzọ. Daalụ maka gị na-emeghe-eme ihe n'eziokwu. Ịhụnanya na-eme karịrị ihe.
mpako nke 116!
isi • October 31, 2013 na 3:02 pm • zaghachi
Oké akụkọ Njem na congrats. M na-achọ gị gaara mere doro na ị na-ahọrọ nke a na nwunye nwere ihe ọ bụla na-eme na ihe na-ezighị ezi na ọ bụ na-efu na a nwa nwaanyị. The akụkọ doo a adabaghi ​​na na ebe. Ọzọkwa, ọ ga-doo anya na ikekwe ị na-ahọrọ nke a na chọọchị na a akwụkwọ na-etinye gị na ọnọdụ na-gburugburu ole na ole nwa inyom. Ọtụtụ ojii ndụ dị ka dum na n'akụkụ nile nke ọha mmadụ na nke a nwere mmetụta n'otu agbụrụ di na nwunye. M na ya onwe ga n'anya ịhụ nwa inyom na àgwà nwa ikom, ma m nwere ike na-arụ ụka na ihe Chineke Igbere. Best chọrọ ka gị na ezinụlọ gị b
David • October 31, 2013 na 3:06 pm • zaghachi
magburu onwe blog. M na-aga na-eji okwu “wifing” ugbu a. nkwanye ùgwù, n'ezie.
Sean • October 31, 2013 na 3:07 pm • zaghachi
Nwunye m & M na-na-acha ọcha… anyị nwere 3 ọcha ụmụ na 1 African nwa (Ethiopia). Anyị na-enweta ụfọdụ nke otu ajụjụ na iberibe stares, Ma anyị maara na anyị na-Chineke hiwere na-a ezinụlọ!
M na-ekele gị ime ihe n'eziokwu na openness na uche Chineke maka ndụ gị… nke m na-eche bụ isi ihe gị isiokwu – Na-achọ uche Chineke kama anyị onwe anyị mmasị!
Nke a na Akwụkwọ Nsọ echiche nwere ike ịbụ “depụtaghachiri & pasted” na akụkụ nile nke a kwere ekwe ndụ… na ga!
jholy • October 31, 2013 na 3:10 pm • zaghachi
M akụ gị maka njikere ịkọrọ gị “ihe” n'ihi na ndidọ n'èzí nke agbụrụ. My akpa echiche, dị ka a nwoke lụrụ ihe Asian nwaanyị, E mere i ji chee na ọ dị mkpa ziri ezi nke a ka onye ọ bụla. N'ezie, m na nwunye m’ akpụkpọ ụda yiri, anyị nzụlite na otú e si zụlite ndị n'ebe dị anya na onye ọ bụla ndị ọzọ, onye ọ bụla nwere ike ikwu “gịnị mere na ị lụọ ya?”Dị ka i kwuru, nwunye gị, bụ nwunye, IHE helpmate, nke ọzọ (ma ọ bụrụ na nwunye m na-agụ, “mma”) ọkara na O nyere. Chineke na-ewetara ndị na ndụ anyị dị anyị mkpa ka, iji aka anyị na-eme ka anyị mma. Ya mere, ihe ma ọ bụrụ na onye na-egosi dị iche iche si m na-abụghị. Dị ka gị, anyị niile kwesịrị na-achọ ndị na a Chineke na-achọ obi nke na ihe ndị kasị mma àgwà onye nwere ike inweta.
enwe • October 31, 2013 na 3:18 pm • zaghachi
Great post. -Eme ihe n'eziokwu na m kweere na ọtụtụ ndị ọzọ Kraịst karịsịa otu Christian inyom (onwe m gụnyere) a ga-lụrụ di na nwunye ma ọ bụ nwere ike na a lụrụ di na nwunye mee elu mee ma ọ bụrụ na anyị na-ọkọdọ Bibie ụfọdụ anyị na-emighị emi echiche. Dị nnọọ na nso nso M na malitere ikpe ekpere Chineke m ka m chọrọ Ua kacha mma. Anyị nwere ịtụkwasị Nna anyị nke eluigwe na ọ maara ihe dị anyị mkpa. My isi ihe na-m na-achọ a di na-atụ egwu Chineke ma na m hụrụ n'anya otú ị kwuru na isi ihe supersedes agbụrụ, n'agbanyeghi na Chineke ga-agọzi anyị ka ọchịchọ obi anyị. Great post n Chineke na-agọzi
Nicole • October 31, 2013 na 3:20 pm • zaghachi
Great ọrụ nke ọ bụghị nanị na-ekwupụta onwe gị, ma ime otú ahụ n'ụzọ na-ndị ọzọ ga-aghọta. Mgbe anyị na-amalite ịgbanwe anyị n'ọnọdụ na ndụ n'ozuzu, anyị ga-ahụ ọtụtụ ihe anyị na- “na-atụ anya” nwere ihe ọ bụla na-eme na uche nke Nna. The nso na anyị na-enye, ndị ọzọ na ndị ọzọ anyị “na-atụ anya” ịgbanwe n'ihi na ha na-amalite n'ahịrị na uche ya na ọ bụghị onwe anyị. Chineke gọzie gị na ezinụlọ gị. Nọgidenụ na-eme ihe ị na-eme ka nwanna m na Christ. Black, acha ọcha ma ọ purple, agba si enweghị ihe mgbe ọ na-abịa ahụ Kraịst dị n'otu. M na a gọziri na ihe ịtụnanya onye nke Chineke, onye na-eme m otu agbụrụ, ma karịa ihe ọ bụla ọ bụ ya bụ a onye Chineke bu n'obi nke bụ ihe niile dị mkpa na m akwụkwọ.
Andrea • October 31, 2013 na 3:22 pm • zaghachi
ekele Njem! Ọ na-n'ezie ọkọdọ m na-eche echiche banyere m mmasị na otú mgbe ụfọdụ m na-na na na-na-na ogwe aka n'ogologo si na ezi ihe ụfọdụ gents nnọọ cos adịghị m deem ha mara mma. Points okwu nke mpako. Ma, n'ezie ume site na kwuru na-akwado agbụrụ mmekọrịta. M na-achọ ndị ezinụlọ m na-akọrọ ndị a echiche. Ọ bụrụ na m ịlụ di na nwunye a na nwa nwoke, ọ ga-adị mfe.
Jason • October 31, 2013 na 3:38 pm • zaghachi
Echere m na ọ bụ oké na ị anya gara aga acha na agbụrụ. M ike iguzo mgbe ndị mmadụ na-agbaso na na chọrọ ịnọ n'ime agbụrụ ha maka ihe ọ bụla mere. Anyị bụ ndị dị iche iche na shades nke anụ niile emetụta mmehie. My girl bụ Spanish na m nwa kama m na mgbe anya na ya na-ahụ a Spanish nwaanyị, M na-ele ya na dị nnọọ ahụ a nwaanyị, n'agbanyeghị nke acha ma ọ bụ agbụrụ.
MrsHendrix • October 31, 2013 na 3:48 pm • zaghachi
Amen. M na-agọzi gị omume. N'otu oge, anyị na-enwe mmekọrịta na Kraịst, Uche ya na-aghọ anyị uche na uche Ya bụ n'ihi na ị na nwunye nwunye gị akpa ọchị…. (ma ọ bụrụ na na ọbụna-eme ka uche). Ọ e mere ya karịsịa n'ihi na ị na osote itughari. Ọ eleghị anya abịakwasị a otutu flack ịlụ a “black” Dude, ma Jehova maara kpọmkwem ihe ndị unu abụọ dị mkpa. Na-achọ Ya mbụ na ihe niile a ga-atụkwasịkwara unu (tinyere nri na nwunye).
Nọrọ agọzi nwanne na anọgide na-abụ a ngọzi ndị ọzọ dị ka nke ọma.
Leilani Bailey • October 31, 2013 na 3:48 pm • zaghachi
Chineke gọzie gị Union Njem.
Daalụ maka ekere òkè gị ahụmahụ.
Gods Marriage ọgbụgba ndụ anaghị iso nke agba ma ọ bụ agbụrụ. Ebighi-ebi ya Ịhụnanya karịa niile..
Stacy • October 31, 2013 na 4:05 pm • zaghachi
Ya mere ụtọ na ị gwa a. Dị ka nke onye na-bi-agbụrụ alụmdi na nwunye na nwunye a onye na-adịghị na-egosipụta ma nke ha :) isiokwu a dị nnọọ adị n'ezie m. Chineke agọziwo m enweghị atụ na di m, na na ọ na-ewute m na-eche na e nwere ndị si n'ebe ndị na-ajụ, ihe Chineke nwere maka ha n'ihi na nke ha onwe ha amaghị / ịkpa ókè agbụrụ.
Favorite akara: “N'ihi ya, m wifed ya.” akpa ọchị!
Natalie • October 31, 2013 na 4:30 pm • zaghachi
Nso akwa isiokwu, na im obi ụtọ na e nwere ndị si n'ebe dị ka gị onye na-asaghe elu mkparịta ụka banyere a isiokwu dị ka nke a na ịbụ ezigbo ya, n'ihi na e nwere mgbe niile yiri ka a ga a ihere mmasị agbụrụ mmekọrịta.
M Chinese na di m bụ nwa, na siiri anyị na-na okosobode tinyere njem anyị ọnụ ndidi siri ike na a ezigbo ule. Anyị lụrụ na-eto eto dị nnọọ ka gị na nwunye, m 21 na ọ bụ 24. Anyị nwere 2 ndinyom ọnụ, na mgbe im si naanị na ha, M ga na-kwụsịrị na n'okporo ámá na ndị mba ọzọ ga-adị ka “bụ nna nwa?”
Na nke ka nke na-alụ kemgbe na ezinụlọ m, n'ihi na ha emeghi chere na m ga-alụ nwunye a nwa nwoke. Anyị na-ama obere agbamakwụkwọ na ihe karịrị ọkara nke ndị ezinụlọ m na jụrụ abịa. Ma Chineke bụ ịtụnanya n'ihi na site na niile na, m mum okwukwe e gbalịrị na-anwale, mindsets n'ime ezinụlọ m na e gbanwere. My di a na-anabata ugbu a, na m mum ga ịnakwere ya dị ka nwa ya nwoke na iwu ugbu a (nke bụ nnukwu ndibiat maka anyị!) E nwere ihe ka ụfọdụ ụzọ na-aga, ma nke ukwuu ka ọganihu na m na-enye ihe niile Chineke otuto. Jide ka Njem, na ị na mmụọ nsọ ka ndị ọzọ na m ekpe ekpere ka Chineke ga-anọgide na-agọzi gị, gị na ezinụlọ gị na gị ozi.
PS: Ị mkpa gbadata ịrụ na London, UK oge ụfọdụ!!
LoganSharp • October 31, 2013 na 4:38 pm • zaghachi
Nke ọma kwuru. My nwunye bụ ndị Spain, M na-acha ọcha. Race mgbe wee n'ime echiche m maka nke ukwuu ihe i kwuru mgbe ị zutere nwunye gị; M hụrụ nwunye m ahuhu n'ihi na Chineke, ọchịchọ ya ozi ụmụ akwụkwọ na anyị na-enwe a otutu nke otu fim na music na-ekpe ekpere maka onye ọ bụla ọzọ n'oge mkpakọrịta nwoke na nwaanyị. M na-adịghị na-mere ndị mmadụ na-eche si agbụrụ alụmdi na nwunye na “weird”.
Daalụ maka na-ekere òkè na ya na gị na Fans na-enye agbamume.
Natasha • October 31, 2013 na 4:39 pm • zaghachi
Nke a bụ egwu! Daalụ maka nkekọrịta njem. Ịhụnanya Chineke nwere dịghị akpan akpan mmasị ma na nnapụta. Naa akụkọ bụ ngọzi.
LeonMartinez • October 31, 2013 na 4:41 pm • zaghachi
mara mma na-agba akaebe! N'eziokwu a gwara m na ọ bụ ezie na m na-na na mgbe nwere agbụrụ mmasị ma ọ bụ ihe ọ bụla dị na, ọ ka obi sie m na Chineke ga-enye ihe dị anyị mkpa, ọ bụchaghị chọrọ. Ị na-na na a ezi n'ike mmụọ nsọ na ihe akaebe nke na-agbanwe ndụ ike nke Chineke. Chineke gọzie gị na mara mma obere fam!
Reewantae • October 31, 2013 na 5:01 pm • zaghachi
Wonderful isiokwu, njem! Oge mbụ commenter ebe a!
Ị bụ na mgbe mgbe ị na-ekwu, “M na-achọghị m kpọrọ ihe mmasị na nwunye n'elu ihe dị m mkpa na a na nwunye.” Mgbe ụfọdụ,, Adị m ka m ileghara anya dị ka a na nwanyị n'ihi na àgwà m na temperament bụ otu ụzọ. M ihe ị pụrụ ịkpọ “weird” ma ọ bụ “dị iche iche” dị ka ọtụtụ ndị na m maara. Ụfọdụ ụmụ okorobịa dị ka a girl onye bụ onye a obere ihe n'ime mainstream ejiji ma ọ bụ onye bụ a obere ihe na-elekọta mmadụ na nkwuwa okwu m ka m. N'oge ndị ọzọ, Echere m na ma eleghị anya, m na-eme onwe m obere dị site m obere ahọ echiche. Ndị ụzọ na-adịghị dabere na mba, ma ihe na mmadụ ndabere ma ọ bụ ha mode nke njem… n'ihi na m na-agba ịnyịnya na ụgbọ ala akwụkwọ, na m na-adịghị mma ma ọ bụrụ na nwoke achọọ Achụla nwaanyị na m na njem ọha na eze. (Echiche bụ na ọ bụrụ na dị ka mmadụ na-agba ụgbọ ala ma ọ bụ ụgbọ okporo ígwè, i nwere ike imeli na-a ụgbọ ala na ụgbọala otu, ị nwere obere ego ma ọ bụ na-eji ya na-ezighị ezi ihe, na Ya mere enweghị azụmahịa na-agbalị ikwu ụtọ m. akpa ọchị… ma nke a bụ na-ezighị ezi.) M na-ekpe ekpere ka Jehova nyere m aka ịnọ na uche Ya maka ndụ m, nke mere na mgbe oge ruru ka na ụfọdụ onye ahụ na “ihe ọma,” M ga-adị njikere. :)
Chukwu gozie, Bro.
June • October 31, 2013 na 5:25 pm • zaghachi
M kpamkpam ekweta na mba ga-abụ otu n'ime ndị na-emeghe n'aka preferences, ma anaghị m na-ekweta na ya, ma ọ bụ ndị ọzọ 'na-amasị’ bu ihe-efu mgbe emeso esemokwu. O di nwute na, na m ahụmahụ, ihe m chere na ọ bụ ihe na-emeghe n'aka mmasị, na nyefere ya na ihu ọma nke Chineke na n'ihu m,ghọrọ a oké njọ isi iyi nke erughị ala na nwunye m, ọtụtụ afọ mgbe e mesịrị, mgbe di m nwetara alot of ibu, on top of m ihe m ama weere na ọ bụ ihe ibu etiti. M mgbe nile na-abata ọzọ egwuregwu ụdị, n'ihi ya, mgbe m na-eche ihe ihe ndị ọzọ ibu ibu, m na-ekweta, M na-enwe mmekọahụ na agbanyụrụ. Nke ahụ mere ka esemokwu, na esemokwu mere m mmasị ibu a ugwu. Kama ịbụ a mfe ahụ mmasị m na-etinye onwe na ihu ọma nke ihe na-emenụ ihe ndị magburu onwe onye nke Chineke ọ bụ, esemokwu anyị na-enwe banyere m ghara inwe ịnụ ọkụ n'obi banyere mmekọahụ, edemede mmetụta na m 'nyere elu’ ihe na-anya dị mkpa na ọ dị mkpa, na ugbu a chere ihu na-enwe na-a dutiful na-ahụ n'anya-enwe mmekọahụ na onye m na-apụghị ikwu ka ikpọkidem. Naanị Chineke amara emewo ka anyị site ka ọ dị ugbu, ma, n'eziokwu, ya ahu ka a isi Gbanyụọ, na m ka ya bụrụ na m eyịride na m mmasị na-echere maka onye dabara m anụ ahụ ụdị, nakwa dị ka m mkpa a Nsọpụrụ Chineke di
Maddy • October 31, 2013 na 5:26 pm • zaghachi
na, ma m chọrọ ịlụ gị. Mma ka i na agbanyeghị. Bad m..
SheilaTurner • October 31, 2013 na 5:28 pm • zaghachi
Dị ka a multi-batara onye, M mere ka ụmụ m anya na agwa nke onye mgbe ị na-ahọrọ a enyi nwoke / enyi nwanyị na-erughị ihe na agba akpụkpọ anụ. N'ihi na ha dere ndị si n'agbụrụ niile na e kpughere na ọtụtụ omenala. My comment kemgbe ogologo oge ka ha na-emeso ha na-akwanyere na ha hụrụ ha n'anya, m ga-agwa gị na i nwere ike ịdị na na onye dabeere na ụcha akpụkpọ.
M nwere ikwu na m mmasị akụkụ nke a blog bụ nkwupụta a ebe a, “M na-achọghị m kpọrọ ihe mmasị na nwunye n'elu ihe dị m mkpa na a na nwunye.”
Na nri e chịkọtara ya!!!!
Eric • October 31, 2013 na 5:42 pm • zaghachi
ozi ọma! Ọ na-adịghị ọbụna “ọcha”! Na ị na-adịghị ọbụna “black” njem. Ndị okwu na-iberibe. Toonụ Chineke anyị niile bụ nke onye Adam agbụrụ. N'agbanyeghị na anyị dị iche iche ethnicities, anyị na-dị ná mma na Christ! Amen dị egwu. Good isiokwu. otu Blood. otu Nwa.
Jessica • October 31, 2013 na 5:49 pm • zaghachi
Awesome! Daalụ maka na-ede nke a. Ị bụ ndị dị otú ahụ na-agba ume, na m na-eto Chineke na e nwere Chineke di na nwunye dị ka gị na nwunye gị si n'ebe. Ọzọkwa, M n'aka na ọnụ, ị na-enwe ike iru a ọtụtụ mmadụ karịa ị ga-enwe ike iche. Nọgidenụ reppin Jesus.
aha: Gịnị mere ọ lụrụ a White Girl site Njem Lee | 9jagirl4real
Leesa • October 31, 2013 na 6:03 pm • zaghachi
Nke a bụ egwu na-agụ! -agba nnọọ ume. Mụ onwe m si mesoo disppointing na rasist comments. My di ọcha na m nwa. Anyị ma na-abịa site na kpam kpam diffrent ụwa. Ọ dịghị mgbe m chere na m ga-alụ n'èzí m mba. M ọbụna vainly kpere ekpere ka Chineke ga-hụrụ m a nwa nwoke atụ ụjọ akpa ọchị. Ma m na-ekele Chineke na ọ maara ihe bụ ihe kacha mma n'ihi na m na-agọzi bụghị na dị nnọọ a ọcha ma eze m n'ụwa! Ebe ọ bụ na anyị na a na di na nwunye m n'ezie ghọtara ihe ọ pụtara n'anya na ndị a ahụ nke ụwa. Ọ bụghị na-agwa anyị niile Biz ma anyị na e-esiri ọmụmụ mbipụta na-ekele Chineke maka na di m n'ihi na o wee na-agba m ume. Anyị hụrụ gị music na gị ozi. Chineke na-agọzi gị na ezinụlọ gị!
kaileybrown • October 31, 2013 na 7:27 pm • zaghachi
Adị m ọcha, na di m bụ nwa. Mgbe i na-ịme ya na ọtụtụ ndị na-echere ruo mgbe ọ hapụrụ na-ekwu “ọ isnt ihe i na-atụ anya!!” ya ji mee ka m na-apụ ara. dị ka, onye ị na-na-ekpe ikpe m alụmdi na nwunye. Ugbu a m dị nnọọ shrug na-asị “ọ wasnt ihe i na-atụ anya ma, Ma, m maara 100% na ọ bụ ya bụ onye Chineke zitere ka m” ya mma ịmara gị aproach. Na dị nnọọ mara na gị ezi Fans mara ihe mere o bụ nwunye gị.
Taylor • October 31, 2013 na 7:37 pm • zaghachi
****Njem Lee ****
na “martin” Comment ka m inyefe n'ala ochi…ma m maa eche a dum Blog!! Man anya na n'èzí na Chineke na-ele obi. My na nwunye mgbe kwuru na A womans kwesịrị ime ka obi ka na-ezo n'ime Chineke. Nke mmadụ nwere ka ha chọọ ya na Order n'ezie Chọta ya…
Jake • October 31, 2013 na 7:51 pm • zaghachi
All bụ ndị e mere baptizim baa na Kraịst eyikwasịwo Kraịst, E nweghịkwa onye Juu ma ọ bụ Greek, Scinthian ma obi fere azụ. Nke a bụ eziokwu kpughere dabeere n'Akwụkwọ Nsọ,, Otú ọ dị, ọtụtụ a kwere ekwe ka nwere “unrenewed” uche na nke ahụ bụ. Mere agbụrụ bụ ka ihe nke. M ga-anọgide na-toro na mụrụ ụfụ ruo mgbe Kraịst ga-guzobere anyị niile.
Pamela • October 31, 2013 na 7:53 pm • zaghachi
okwu ọma! N'anya ezinụlọ eserese. ngọzi!
Leesa • October 31, 2013 na 7:54 pm • zaghachi
M na-abụghị di na nwunye ma ma a ọtụtụ ụmụ nwanne mama m na-na na ha na-lụrụ di na nwunye ndị si n'agbụrụ niile gburugburu ụwa. Ọ bụ ya mere jụụ na ezinụlọ nwere ike nke ọtụtụ dị iche iche akpukpọ agba. M na-eche agbụrụ di na nwunye na-mara mma n'ihi na ha na-echetara anyị na anyị nile bụ ụmụ Ya dokwara na ndị mara mma kere. Jehova na-ele obi na otú anyị kwesịrị dị ka ụmụ mmadụ na ndị enyi na ihunanya mmekọrịta.
IAMDJLADYJ • October 31, 2013 na 7:54 pm • zaghachi
Nke a sitere n'ike mmụọ nsọ na-agọzi m na ọtụtụ ụzọ. M n'anya ịhụ agbụrụ di na nwunye / di na nwunye! Ọ na-mgbe nile na m chọrọ ka a na nwa nwaanyị ịlụ n'èzí m mba. Ana m atụ anya ụbọchị m izute m ma ọ bụ nwunye maara na ọ na-aka ẹmende na e mere m! Anyị ga-esi na-ebe n'elu ihe niile ọzọ ebe anyị na-ekpegara Chineke na-anabata ihe niile O nwere maka anyị. N'aka na ọ bụ OK na-arịọ ma ọ gwa Chineke ihe ị chọrọ ma ọ bụ dị ka. Igwu a Ọ na-ama maara. Mma ma Ọ maara ihe bụ ihe kasị mma maka anyị. Ya mere, anyị ga-abụ echeta ihe anyị na-arịọ ma ọ bụ na-ekpe ekpere maka. Gịnị ị chọrọ ọ bụghị mgbe niile ihe ị chọrọ! Atụkwasị Chineke Obi-eme ka gị na-arịọ ka a mara na-ekwe ka ya na-eme ihe Ọ na-eme!
AmandaB • October 31, 2013 na 8:05 pm • zaghachi
M n'ezie ụtọ na ị lụrụ di na nwunye Jessica. Ọ bụ ihe ịtụnanya na onye na ihe ịtụnanya obi. Ị abụọ nwere ihe dị ịtụnanya ndị mmadụ dị ka a di na nwunye bụ na ịhụnanya na onye ọ bụla ọzọ na Jesus. Dị nnọọ na-ekele gị nke ukwuu maka na-achọ na obi na-adịghị agba na ihu.
Paula • October 31, 2013 na 8:23 pm • zaghachi
njem, niile i nwere ike ikwu bụ ndị magburu onwe, okwu ike na-egosipụta ọṅụ na-enwe gị ịkọrọ ndị dị otú ahụ nghọta banyere ihe mere na ị lụọ nwunye gị, Nke a n'ezie na-aga na-enyere ndị na-ahụ site ọzọ n'ọnọdụ na onye eleghị anya na-achụ nwunye na-eme n'ọdịnihu. Chineke maara n'ezie ihe bụ ihe kasị mma maka anyị. Ka onyenwe anọgide gọzie gị na ezinụlọ gị!
atiya • October 31, 2013 na 8:25 pm • zaghachi
mara mma & ịtụnanya….
dmoney • October 31, 2013 na 9:00 pm • zaghachi
njem, na-ekele gị maka ikwusa eziokwu ahụ nụrụ akụkọ ụgha na nye m. ezie na m na nwa im mgbe nọchiri onwe m na onye nke a dị iche iche agbụrụ. ma i Chineke anọwo na-eji nwayọọ nwayọọ na-emeso m na-na ịnakwere si n'agbụrụ niile na na ihe dị mkpa bụ obi ya na-egosipụta na nke Christ. WTF ihe ka mkpa kasị. Plus i nwere zuru ịhụnanya na enyemaka nke m n'ụlọ ụka. anyị jupụtara biracial di na nwunye na weere ụmụaka. plus i nwere ọtụtụ mbuaha enyi na e overrunning na mba akpa ọchị. IM mpako nke gị maka ọtọ ma na-agwa ụwa ihe ha kwesịrị ịnụ :)
sP • October 31, 2013 na 9:09 pm • zaghachi
M ụtọ na m na-agụ nke a post, njem. Ọ akụrisị nso n'ụlọ. M na-na esighị n'otu agbụrụ alụmdi na nwunye. Adị m oji (Jamaica, Native American, ọ bụ ezinụlọ nwere ike na-aga na) na di m bụ Hungarian, German, wdg-ya mere, ọ bụ na-acha ọcha. Mgbe m na-maara na m ga-alụ nwunye a black Ihọd na amaghị m ihe agbụrụ m ga-eme n'ọdịnihu na di ga-. Mere, dị nnọọ ka ị na, M gara mahadum ghara ịchọ ụbọchị ma na-eto eto dị ka a Kraịst-na-eso ụzọ na-aga akwụkwọ ma m zutere na dara na ịhụnanya na a pụrụ iche na-eto eto na-acha ọcha nwoke.
Mgbe anyị malitere-akpa, a ọnwa ole na ole na anyị maara na anyị ga-alụ ụfọdụ ụbọchị na anyị mere nnọọ otú ahụ a afọ ole na ole mgbe e mesịrị. Enwere m ihe ùgwù iji tolite na a iche iche ebe na ndị ezinụlọ bụ ndị na-na agbụrụ mmekọrịta ka, ụcha akpụkpọ ahụ ya mgbe phased m. M hụrụ ya maka onye ọ bụ; Chineke na mmadụ onye obi jupụtara ịhụnanya, ịdị umeala n'obi na obiọma. O lere anya n'oge gara aga m acha dị ka nke ọma, na-achọ na na obi m na-ahụ m n'ihi onye m na n'ime. E nwere doro anya na Chineke mere ka anyị ọnụ. Agaraghị m n'aka-ẹmende a mma di onwe m na ọ bụla e nyere ụbọchị. Ee, M nwere ike ịbụ na m mmasị kwa ka ihe m chọrọ na di m na-, ma eziokwu bụ, N'ezie na Chineke mere ka m ukwuu karịa m kwesịrị na ọtụtụ ihe ndị ọzọ na dịghị mgbe m maara m chọrọ ọbụna.
E nwere mgbe ụfọdụ ịbụ onye agbụrụ di na nwunye o yiri ihere na ọnọdụ ụfọdụ ma ikpeazụ m enyocha-na anyị niile na igba obara otu na agba.
Jeffrey • October 31, 2013 na 9:34 pm • zaghachi
“E nweghị ihe ọ dị njọ na-enwe mmasị, ma anyị nwere jide ha na-emeghe n'aka.” Great quote ọ bụla akwara nke ndụ!
MarcosJackson • October 31, 2013 na 9:46 pm • zaghachi
Daalụ maka ikenye a! Atọ m ụtọ ime ihe n'eziokwu na nghọta. Chineke na-agọzi ndị ma nke unu!
Melodye • October 31, 2013 na 9:57 pm • zaghachi
Obi dị m ụtọ n'ihi na ndị mmadụ bụ ndị dị njikere ige Chineke ntị n'elu ọha mmadụ na n'akụkụ nile nke ndụ na-ekwe ka uche-ha ka o kwekọọ uche Ya na Ya ụzọ. M na-eche mgbe anyị na-adịghị ọbụna aghọta na igbe na parameters na anyị etinye onwe anyị. Ezinụlọ m agha ka anyị na na colorblind n'ihi na ọtụtụ akụkụ niile na-eto eto. Otú ọ dị na South mmasị na stereotypes eze elu, mgbe… M nwere ọbụna a nso Ihọd enyi na mahadum-agwa m na m bụ ihe ndị kasị mma, smart, ịtụnanya girl ọ Ọ mgbe mara ma ọ dị nnọọ mgbe chere na ya ga-akpa na a ___( fanye agbụrụ ebe a)___ girl. KW MY UCHE. hah na m emeghị ọbụna amasị ya na otú. Obi dị m ụtọ na ị na-ekwe onwe gị na-ada na ịhụnanya na-n'aka nke na nrube isi mmalite gị akụkọ ka ndị ọzọ.
Jason • October 31, 2013 na 10:43 pm • zaghachi
Ọnụ Ọgụgụ 12:1-11…Ọ dịghị mkpa ka ziri ezi onwe gị ka ndị ikom dị egwu, na-achọ na-egosi onwe gị mma-nwe-ayi. A obi dị ọcha & ikwesị ntụkwasị obi n'ebe Onyenwe anyị Jizọs ga-kagbuo ọ bụla ụgwọ ma ọ bụ okwu na onye ọ bụla nwere ike spek megide unu.
kangstawillz • October 31, 2013 na 11:15 pm • zaghachi
Yo njem ị bụ man.I ga na-eme otú same.lol.I ga-alụ na-nwe na ụcha akpụkpọ agbụrụ,e.t.c ga mkpa ka ogologo dị ka ọ a Chineke one.GOD gọzie u nwoke.
Lindsey • November 1, 2013 na 12:00 Abụ • zaghachi
Ya mere na-agba ume na-agụ nke a. M na-acha ọcha na di m bụ nwa, na anyị na-ebi a ukwuu n'ime ndị Spain obi. Anyị nwere 2 mma ụmụ agbọghọ ma dị ka ị pụrụ iche n'echiche na anyị na-alot of anya. Anyị onwe anyị na ezinụlọ nwere ike ịbụ mara mma na-adịghị mma mgbe ụfọdụ. Ma ihe kacha mkpa anyị mụtara bụ na n'agbanyeghị na e nwere ihe na omenala dị iche iche (karịsịa mgbe ọ na-abịa na-azụ ụmụaka na), ihe kacha mkpa bụ ịnọgide na obi anyị na-achọ na Jizọs.
FortuneLawrence • November 1, 2013 na 1:20 Abụ • zaghachi
M na otú gọzie gị post Njem!
Enwere m ajụjụ ezie. Abụ m onye African(black) nwaanyị na m na-ahọrọ na-acha ọcha na ụmụ okorobịa na nwa. Nke bụ ukwuu n'ime n'ihi na m na na na na otú ala ya na ụfọdụ n'ime omenala na m obodo. M ga-asị, M hụrụ n'anya na nwa ikom a ọtụtụ ma dị ka m kwuru, mba m nwere ụfọdụ mkpari kweere. Ị ga-asị na m na-ezighị ezi na-eme ka ndị dị otú ahụ na-amasị?
Julia • November 1, 2013 na 1:53 Abụ • zaghachi
Great isiokwu Njem. M hụrụ n'anya ihe i kwuru banyere agbụrụ ghara ịbụ otu ihe iseokwu. M na-acha ọcha ma ọ bụ ọ dịghị ihe ọzọ anya ya na ọtụtụ ndị na. Na a zụlitere m a biracial home…mama m bụ Italian na Hispanic na papa m na-acha ọcha. M ugbu a na-akpa a ebube nwa onye na-adịghị enwe ihe nke na m ka m ghara ịbụ n'otu agbụrụ dị ka ya. Ọ na-ahụ m dị ka mara mma. Black inyom na aka nke ọzọ na-ahụ m dị ka a iyi egwu. Ha na-ahụ naanị m ka na-acha ọcha…ma ọ bụrụ na ha maara eziokwu. Ọ ga mkpa bụ ihe mba na unu niile na mkpa bụ na 5he onye ị lụrụ di na nwunye bụ onye kwere ekwe kwa. Ekele ọzọ maka isiokwu.
Daniel • November 1, 2013 na 6:27 Abụ • zaghachi
M na-eji iji amaokwu iji kụda ụdị alụmdi na nwunye. “Adam na Iv yikarịrị otu na agba / Samson papa chọrọ ya lụọ onye si ndị mmadụ nke Israel / Isaac papa wee ukwuu iji chọta a nwunye si n'etiti 'ndị ya’ Aịzik, etc…”
My mkparịta ụka na isiokwu a bụ okwu ọjọọ, ntupontupo na - nnọọ hoo haa - kere.
Na mgbe ahụ, Chineke gbanwere obi m na-etinye m na a ọnọdụ ebe enweghị m nhọrọ ma ịdabere na Ya. Ọ kụziiri m ihe ọ bụ na-atụkwasị obi na Ya. Ma nke ahụ bụ mgbe m malitere valuing ndị gbara m gburugburu bụ ndị na-atụkwasị obi na Ya. Enwetara m nso ndị Chineke - n'agbanyeghị omenala ndabere - na dara na ịhụnanya na-eso ụzọ ya n'ihi amara, okwukwe na ịhụnanya ha gosiri.
Ma nke ahụ bụ otú nke a American bịara ịlụ a mara mma, Chineke Brazil girl. Ọ meela 10 ọnwa na Chineke ziri ayi ma nke ukwuu! Ọ na-a sweet mmekọrịta nke gosiworo ugboro ugboro: Ụzọ Chineke na-kacha mma, mgbe anyị echiche na-ule.
Tracy • November 1, 2013 na 8:05 Abụ • zaghachi
M mgbe nile na-eche otú a nwa oyokop a na-agwakọta. M maara m, m ga-achọ n'ụzọ zuru ezu otu agbụrụ ma ọ bụ ndị ọzọ. Ọ ga-dịghị mkpa nke, Chinese, Eskimo, Indian etc. Ọ bụ ajụjụ m mgbe nụrụ okwu.
ELVISNIXON.com • November 1, 2013 na 8:17 Abụ • zaghachi
Hungary bụ Magyars. Magyars bụ lineal ụmụ Attila na Hun (n'ihi ya okwu Hungarian) onye na-emekarị kwuru na dị ka “Mongolian ìgwè” -Attila bụ ka otu n'ime ndị kasị ewu ewu nwoke aha na Hungary- dị ka bụ Apad- ya mere ha nwere,nyochawa, Asian.
Ya mere, ị na-ọbụna ihe iche iche / multicultural karịa ka i chere!
RyonFreeman • November 1, 2013 na 8:32 Abụ • zaghachi
BrendaF • November 1, 2013 na 8:37 Abụ • zaghachi
Nke ahụ bụ egwu! Ya mba n'eziokwu emeghị ọbụna pịa m ruo mgbe m hụrụ nke a post. M nwa na di m bụ ọkara nwa ọcha na (bụ ezie na ọ na-ese ndị Spain) na i na-njakịrị niile oge site na ndị mmadụ na-asị na m na-adịghị amasị nwa ikom. Oh na ekwela ka ha hụ m ụmụaka. BOL! Ọ bụ mgbe niile a abụọ na-ahụ. M na a lụrụ di na nwunye 7 afọ na ọ bụ ka na-akpa ọchị nke a ụbọchị. Chineke na-agọzi gị na ezinụlọ gị nwoke!
TamaraC • November 1, 2013 na 8:41 Abụ • zaghachi
Amen! Daalụ! Your àmà na-aga gburugburu ụwa… Ndị mmadụ mkpa na. Chukwu gozie gị!!
Ozi si Germany, Europe!
Keinya • November 1, 2013 na 8:44 Abụ • zaghachi
M na-ekele a na post nke ukwuu. M na agbụrụ alụmdi na nwunye nakwa na mụ na di m ma nwere akụkọ banyere otú ndị mmadụ bụ ndị nwere ike ịmata anyị na-eche dị ka ha maara na anyị mara nke ọma n'ụzọ ụfọdụ na-amụta ihe anyị ma ọ bụ nwunye anya dị ka ma ọ bụ na m ikpe ahụ a eserese nke m ụmụaka (n'ihi na ha nwere ike rue maka ya anya naanị ruo mgbe ị maara na ha bụ akụkụ nwa mgbe ahụ ị nwere ike enwetaghị ụfọdụ obere atụmatụ) ozugbo ahụ, ha ga-abụ na-adịghị a black papa na na bụ ha na-atụ anya. Ọzọkwa, m ụmụaka aga were were asụ asụsụ ọzọ ka na n'ezie confuses ndị mmadụ kemgbe anyị aha ikpeazụ bụ Lawrence. E nwere ihe a akụkọ n'azụ na kwa n'ihi na ọ bụ nke mbuaha agbụrụ kwa (nnọọ nwa). agbanyeghị, M n'anya eziokwu na i otụk na nke a n'ihi na ụfọdụ, ọ bụ ndị dị otú ahụ a nnukwu ndibiat na ọbụna ọgụ na mgba dị ka e nwere ụfọdụ dị ike agbụrụ mmetụta na nrụgide na anyị na ụwa (media, ndị anyị hụrụ n'anya ọbụna, enyi, wdg). My abụọ ahụ nwechara mmetụta na gị na ọtụtụ ndị ọzọ bụ ndị kwuru okwu. Daalụ!
Keinya • November 1, 2013 na 8:48 Abụ • zaghachi
N'agbanyeghị, M hụrụ n'anya song “ezi Ihe” banyere nwunye gị. Ọ bụ n'ezie mara mma ma na-eme ka m na-eche echiche nke onwe m mmekọrịta. Thx maka oké music kwa! :)
Logan • November 1, 2013 na 9:17 Abụ • zaghachi
m hụrụ n'anya “robot”!!! M na-aga-agba egwú na ya maka a ngagharingosi.
Michael • November 1, 2013 na 9:37 Abụ • zaghachi
“N'ihi ya, m wifed ya.” M na-ezu ohi na.
TylerDouglas • November 1, 2013 na 9:53 Abụ • zaghachi
OH bịa ON!!!!! M Kọkeshịan, na ọbụna m hụrụ ọ bụla na nwunye nke Martin
Debbie • November 1, 2013 na 10:08 Abụ • zaghachi
M nnọọ obi ụtọ na-agụ nke a na-ahụ na ndị ọzọ na-eso m otu mmetụta kwupụta alụmdi na nwunye na “agbụrụ”, Chukwu gozie!
Jason • November 1, 2013 na 10:35 Abụ • zaghachi
1 Samuel 16:7…Chineke ikpe site obi, Ya mere, gịnị na Na anyị? Anyị kwesịrị ime ka ihe Jehova kwuru ọkọlọtọ anyị, bụghị ihe anụ ahụ anyị chọrọ / abughi ụkpụrụ nke ụwa a. N'okwu a, si a nwoke si n'ọnọdụ, ọkọlọtọ na nwunye bụ Ilu isi 31, bụghị akpụkpọ ụda / bụghị ụwa ụkpụrụ nke ịlụ n'ime gị onwe gị “agbụrụ / agbụrụ.”
tabby • November 1, 2013 na 11:20 Abụ • zaghachi
Dude na bụ egwu!
Tony • November 1, 2013 na 11:31 Abụ • zaghachi
M na-ekele nke a n'ihi na m na African American na nwunye m bụ Hispanic. Ya mba dịghị mgbe a na-akpata m, n'ihi na obi ya n'ihi na Jehova. Anyị nwere ugbu a a nwa nwanyị. Mgbe m na-ele na nwunye m na nwa m na-adịghị ahụ a Hispanic nwaanyị, ma ọ bụ a mbuaha nwa. M nnọọ ịhụ abụọ nnukwu ngọzi ndị na ndụ m (iche site na Onyenwe anyị Jizọs). Mgbe ụfọdụ, m ọbụna na-echefu na anyị bụ ndị na-agbụrụ di na nwunye na ezinụlọ. Ọ bụghị kpọmkwem mfe mgbe niile n'ihi na nke ndị ọzọ, ma m ga-enweghị ka ọ bụla ọzọ ụzọ. Ka Jehova nọgide na-agọzi gị na ezinụlọ gị!
Andrew • November 1, 2013 na 1:09 pm • zaghachi
njem, na-ekele gị nke ukwuu maka nke a. M na-acha ọcha, na site na Cincinnati na ebe i na-eto m na-abụkarị naanị ọcha nwa ewu na ngọngọ. My nwunye kpamkpam dị iche iche na-ekpe. O toro ime obodo Nebraska dị ka a na Mexico. M nwere ike na-adịghị ọbụna na-amalite kọwaa ụfọdụ n'ime akụkọ na ọ ga-agwa m na ya na ụmụnne ya ndị nwoke na-eto eto na n'ihi na nke na-akpọ asị, stereotypes, na ewepụghị si amaghi nke ndị na o toro na.
Ọ kwagara Nati dịrị m. Ọ kwagara n'ebe ahụ na-eche echiche na ọ ga-enweghị ka na-edi na, hear, ma ọ bụ na-enweta ihe ọ gara site na-eto eto. Chaị, ndị anyị ma Akpata oyi wụrụ! The ihe ndị mmadụ ga-asị na anyị na ahịa, na ogige, ma ọ bụ nanị si eri. Ị ga na-eche na anyị na ndị na-show, “Kedu ihe ị ga-eme.” Ọ bụ a na-alụ, ịhụnanya anyị na-anyị sie ike, enyi anyị nwere anyị azụ, na Chineke anyị mere ka anyị ọnụ.
Anyị ugbu a, nwere di na nwunye ruo 11 afọ nwere 4 mara mma ụmụ gosi ya. Anyị na-ebi ugbu a n'otu obere ime obodo ebe o toro. The ịkpọasị bụ obere, ma anya ka e. The ihe anyị na-ekwu / ime mgbe ọ bụla anyị na-enweta ndị a “ọgụ” anyị ebuli ndị na- “awakpo” anyị na-ekpe ekpere. The Bible okwu banyere n'anya onye iro gị dị ka onwe gị, na ezie na m agaghị na-atụle ndị a ndị mmadụ na-iro m, echiche nke bụ na Akwụkwọ Nsọ bụ ka otu.
n'anya, anyị dị nnọọ mkpa iji na-egosi na onye ọ bụla ịhụnanya. Ọ dịghị mkpa na-agba ọsọ ma ọ bụ ndabere nke a onye, Chineke hụrụ ha n'anya, na anyị bụ ịdị ka Kraịst, ka anyị onwe anyị kwesịrị ịhụ ha.
Azazel • November 1, 2013 na 1:58 pm • zaghachi
Wonderful isiokwu Njem lee. Ma m ka na otu ma kemgbe m bụ obere i nwere mmasị na ịlụ a ọcha nwaanyị n'ihi na abụọ n'ime ha lụrụ ọcha inyom. Mgbe i malitere zọpụta m na ọ dịghị ihe dị iche n'etiti nwa ma ọ bụ na-acha ọcha ma ọ bụrụhaala na anyị na-eme otu ihe ahụ Faith.
Andrew almọnd • November 1, 2013 na 2:39 pm • zaghachi
Wonderful post Njem. M na a na-alụ a ọtụtụ na-adịbeghị anya na mkpakọrịta nwoke na nwaanyị ajụjụ ndị dị otú ahụ dị ka onye m ga na-akpa, na mgbe, na ihe mere, na otú chere Chineke site niile na stof na nso nso, na nke a post bụ nnọọ ihe mmụta. Daalụ maka nkekọrịta.
Jenna • November 1, 2013 na 2:43 pm • zaghachi
Wonderful post! njem, i nwere a mara mma ezinụlọ, na m ekele unu maka-ekere òkè gị obi. Ọ bụ ezie na mụ na di m na-ma na-acha ọcha, anyị na-eto dị nnọọ iche iche. Ọ bụ ezi ala okoro na onwe-kwusara redneck. M mgbe obi ọzọ ala gburugburu nwa ndị mmadụ, ọbụna dị ka a obere nwa. M na ọ dịghị mgbe na-emegide ịlụ onye ọcha, ma m mmasị na-maa a haziri maka ndị na hip-iwuli elu omenala. Ọtụtụ mgbe ndị mmadụ na-ajụ anyị otú anyị bịara ọnụ, na ọtụtụ ndị na-na-akpata oyi n'ahụ iji chọpụta na di m bụ na-acha ọcha. Ọ bụghị ihe m chere na onwe m na-eto eto, ma ọ bụ ihe niile m mkpa na a na di na nna anyị ụmụaka. Jehova emewo n'ezie gọzie m, na m nwere ike ewere ndụ m ọ bụla ọzọ ụzọ!
aha: The List | Mmekọrịta Resource Kit
RG • November 1, 2013 na 3:31 pm • zaghachi
Agaghịkwa obi gị ma ọ bụ mmasị ma ihe Chineke zubere / ụwa agwụkwa. Ọ bụ ihe ịtụnanya otú Chineke nduzi ayarade. M Native American onye tolitere na a ndoputa na di m bụ na Mexico. Anyị ma toro dị iche iche na-ekwu, ma anyị kweere na otu Ọkaakaa Chineke onye chọrọ ebe ọ chọrọ ka anyị na-efe Ya na ndokwa ka anyị na-izute. Anyị na-ebi ugbu nso ndoputa n'ụlọ m ala. ekpere m ekpere (dị ka a ọhụrụ Christian na afọ 8) na Chineke ga-eji m n'ebe obibi chọọchị na m ga-emeghi mara na Chineke ga-eto eto m n'ime a Pastor nwunye a kwuru ụka! ma, M gọziri agọzi mara na nke a otu ihe dị ike na Chineke onye kere ụwa nwekwara ike iji anyị na-egosi ndị ọzọ oké ịhụnanya na amara. Na-abịa tinyere n'akụkụ di m ka enyere ya aka na-ekerịta ozi ọma ndị m.
Nke a bụ oké agba m ume. Ma ọ bụ oké ịnụ otú Chineke nwere ike ịgbanwe a obi ime uche Ya! Nọgide na-eme ya na-arụ ọrụ!
Daalụ maka songs na eziokwu ị na-ekwukwa. Ezinụlọ anyị na-arụ gị music. M karịsịa na-eto eto na ụmụ.
halfNhalf • November 1, 2013 na 3:32 pm • zaghachi
My di bụ Mexico, na m Filipino. ama m 3 asụsụ na-amụta a ole na ole ọzọ. Enyi m kasị mma bụ nwa ya na di ya bụ Arabian. Ọ bụ anya ịhụ na a ngwakọta nke agbụrụ na chọọchị dị iche iche na ọbụna iche iche.
Anyị n'ezie dị nnọọ anya na ọdịnaya nke otu uma. Ọ dị mma n'anya na-amụta asụsụ na-ahụ ihe niile nke mara mma omenala. Na Christ e nweghị Jew, Greek, Nwoke ma ọ bụ nwaanyị.
Mat • November 1, 2013 na 4:06 pm • zaghachi
Otu nke m ọzọ ihere “preferences” achọ azụ bụ maka na nwunye m na-a Denver Broncos ofufe.
ekele, Chineke kwere ka m na-eto eto na ntozu okè tupu ya me m stunner m.
Maria • November 1, 2013 na 4:13 pm • zaghachi
M na-acha ọcha, M tụụrụ ime, N'afọ mbụ nke akwụkwọ ahụ na a black Mans nwa. Na atọ ime ọnwa, Chineke zitere m otu enyi – a aja aja Indian nwoke. Anyị na-ma dị malite anyị akwụkwọ ahụ ọrụ. Ihe m na-aga ime bụ crazy ezuru. Mgbe ọ gwara ndị mụrụ ya banyere m na ha na-egwu ịdọrọ niile support, ụmụnne ya jụrụ agwa m. Mgbe a afọ na ọkara anyị lụrụ anyị ka nọ n'ụlọ akwụkwọ, azụ nwa anyị, ka ndị mmadụ nọrọ ná mgbagwoju anya. Chineke dị mma, na otu n'ime ndị kasị sie ike ugboro ná ndụ m, o nyere m otu enyi, Chineke na mmadụ, ka hụrụ m n'anya, niile nke m, m + nwa. Heres ka a ezigbo nwoke. Heres ka a nnọọ ịhụnanya na-emekwa amara Nna.
Aleshia Robinson • November 1, 2013 na 4:48 pm • zaghachi
Nke a bụ ihu abụọ ma mgbe m na-ahụ esighị n'otu agbụrụ di na nwunye na ọha na m na-eche ihe ọ bụla nke ya ma ọ bụghị n'ihi na mgbe m na-ahụ a Black nwoke a na-abụghị Black girl. M na-adịghị ọbụna flinch ma ọ bụrụ na ya Anglịkan ma m maara na ịbụ a Black nwoke a otu bụ ike karịa ọtụtụ. M na-eji na-arụ ọrụ na a hotel n'akụkụ Black ikom na mgbe ọbịa mesoro m nkwanye ùgwù na kweere na m nwere ike ime m ọrụ na mma, ha flipped mgba ọkụ na m Black ngalaba-ọrụ nri n'ihu m. M nwere ike ịnapụta akwa nhicha ka ọnụ ụlọ ha ma ndị ọbịa ga-emeghe ọnụ ụzọ maka ha. M nwere ike ịlele ọbịa na ala ma ha jụrụ “Amaghị m. Nwere ike i mee nke a?” M ike iguzo n'èzí na ezumike na-enweghị nsogbu ma ndị uwe ojii kwụsịrị ha ịjụ “Gịnị ka ị na ụmụ okorobịa na-eme?” Ndị ikpe ma na-emeso Black ikom dị iche iche na m achọpụtabeghị ihe mere. Ya mere, mgbe m na-ahụ a Black nwoke na onye ọ bụla ọzọ, mbụ m echiche bụ “Ọ na-agbalị ime ka ndụ dịkwuo mfe na ya onwe ya.” My abụọ echiche bụ “Ọ chọrọ ya ụmụaka nwere ya atụmatụ.” ma hey, m ga-ekpe ikpe? (Ọ bụ ezie na m na-eme) M ga-abụ na ọtụtụ ịlụ n'èzí m agbụrụ nanị n'ihi ịhụnanya m nke njem otú dị ka m kwuru ná mmalite, a bụ nnọọ ogologo ihu abụọ. Ọ dịkarịa ala, ị lụrụ di na nwunye gị maka nri ihe.
Lynn Burgess • November 1, 2013 na 7:06 pm • zaghachi
M akụ Njem & Jessica Lee. Integration nke ezi na chọọchị nke Jizọs Kraịst na "agbụrụ" alụmdi na nwunye n'ime chọọchị bụ azịza ịkpa ókè agbụrụ na omenala. E nwere nanị otu agbụrụ, agbụrụ mmadụ, "Nwoke na nwanyị ka O kere ha ..." (Genesis 5:2a), na dịghị ebe ọ bụla Akwụkwọ Nsọ kwuru na ịlụ di na nwunye ndị gị akpụkpọ ahụ ụda ma ọ bụ na anya udi.
Tiona • November 1, 2013 na 8:14 pm • zaghachi
Daalụ maka isiokwu! Dị ka otu nwa nwaanyị nke hụrụ Chineke n'anya na-achọ ibi ndụ m n'ụzọ na-atọ ya ụtọ na-egosipụta ịhụnanya ya na ndị ọzọ, , M kpere ekpere ike banyere okwu a. Ndị otu ikom na chọọchị m gara ukwuu n'ime kemgbe na-abụghị nwa ikom. Mgbe ụfọdụ m na-eche dị ka m na na ala nke totem osisi, asọ mpi megide ọcha, Asian na Hispanic inyom na ogologo, eru ntutu na atụmatụ na m ga-enwe. Ọbụna na-achọ site na ụfọdụ nke Christian mkpakọrịta nwoke na nwaanyị na saịtị, Na m hụrụ na a ọgụgụ buru ibu nke ndị na-siri ike profaịlụ na-egosi na ha nwere mmasị na-mara mma nke ukwuu niile ethnicities ma e wezụga African-American.
Your isiokwu bụ na-agba ume m na ịnọ na. M ga-atụkwasị obi na Chineke na-enye na ebe niile nke ndụ m, tinyere m mmekọrịta. ekele!
Daalụ maka ime ihe n'eziokwu unu!
nne nne • November 1, 2013 na 10:31 pm • zaghachi
ọtụtụ, ọtụtụ afọ gara aga mgbe m ọkpara bụ banyere 2, anyị kwọ ụgbọala na site a black ngalaba nke obodo na o kwuru na ndị Izrel niile na oji jụrụ ihe mere bụ na onye ọ bụla na nwa. M gbalịrị ịkọwa na a ogologo oge gara aga ndị mmadụ chere na ọ bụ mma ma ọ bụrụ na niile ndị ọcha bi otu ebe na-niile na nwa ndị mmadụ biri na otu ebe. M n'ihu kwuru na ugbu a, anyị maara na ọ dịghị eme ka ọ bụla dị iche ihe na agba akpụkpọ gị bụ. Si n'ọnụ ụmụ ọhụrụ na ụmụ……ọ si, “Yeah, ihe dị mkpa bụ na anyị na anụ ahụ!”
Jays_Page • November 2, 2013 na 12:56 Abụ • zaghachi
Kwuru nke ọma nwanne.
ntị ndekai • November 2, 2013 na 3:32 Abụ • zaghachi
marring a Chineke na-atụ egwu nwanyị bụ ndị kasị mma ị pụrụ ime iji ezinụlọ obi ụtọ. kwuru nke ọma njem ihe ị chọrọ na a inyom bụ nnọọ mkpa karịa ihe ọ ga-ele anya dị ka.
aha: Saturday Tie mkpu-outs: SBTS, Ịcha Ọ Kwụ Ọtọ, & Ministry Links | H.B. Charles Obere.
Kaila • November 2, 2013 na 4:19 pm • zaghachi
M n'anya na ị bụ nke mere na-emeghe ma n'eziokwu na a post. M na-eche dị ka omume nke agbụrụ alụmdi na nwunye na mkpakọrịta nwoke na nwaanyị bụ a isiokwu ndị mmadụ mkpa ihe na-emeghe na-atụle n'ihi na ọ bụla ọgbọ na-adị m ka na ndị mmadụ nwere otu ihe iseokwu na ya. Si n'echiche nke m na m chere na ọ bụ mara mma ịhụ otú ịhụnanya adịghị akpa ókè.
Ma m na-eche na m openness n'ebe ọ bụ n'ihi na m mgbe niile toro n'obodo ebe a na ọ bụghị nanị otu agbụrụ na nne na nna m mgbe zụrụ m na-enweghị mmasị n'ebe onye ọ bụla n'ihi na ha na akpụkpọ. ma, M mere na-enweta ụfọdụ slack m keobere afọ mgbe m were enyi m kasị mma, onye na-acha ọcha, ka prom n'ihi nna m na nne nne bụ adịghị ụtọ nke ndị ọcha. Otú ọ dị, ya mmeghachi omume na-agbanwekwa obi m banyere onye m ga ma ọ bụ na-ekwesịghị ụbọchị.
Ọ dịghị mgbe m nwere a mmasị na agbụrụ m dere. ma, mgbe ezinụlọ m chọpụtara na m nwere enyi nwoke na ọ bụ nwa, o juru ha anya. O juru ha anya n'ihi na m ezinụlọ na a bi a predominately ọcha ebe maka gara aga 10 afọ na ha chere na ga achịkwa m mmekọrịta.
Daniel • November 2, 2013 na 4:43 pm • zaghachi
Nke a bụ nnọọ na-agba ume post. My nwunye bụ nwa / El Salvadorean. .. na m a Korean nwoke…. Ọ bụ nnọọ emetụbeghị na Korean omenala ịlụ mpụga nke Korean agbụrụ ka naanị a nwa / Latina nwaanyị. Dị ka ihe iberibe agbụrụ di na nwunye na anyị chere ihu ihe isi ike, ma nanị ihe na mkpa bụ Kraịst na mmekọrịta anyị na Kraịst site enyi mbedo na ugbu a n'alụmdi na nwunye anyị.
Ọ dịghị mgbe m n'ezie biputere na ihe dị ka nke a ma nke a na post ka agwa m ma na-egosi mkpebi m na otú m kansul ndị ọzọ na-na-achụ ihe na-achọta a nwunye na ha agbụrụ.
Kevin • November 2, 2013 na 8:12 pm • zaghachi
M na-eche na nke a bụ ihe ịtụnanya akụkọ. M n'anya otú uzo ị bụ n'ihi na ọtụtụ n'ime anyị na-agbalị izochi ihe dị ka chọrọ preferences, ma ana m ahụ n'anya otú ị kwuru na anyị nwere n'okpuru ha. M ekpe ekpere ka Chineke si egosi m ihe dị ka nke a n'ihi na m kweere n'ezie na ọ ga-enyere m aka na obi m na anya na Chineke na Okwu ya ma ọ bụghị nanị na ọdịdị nke ndị inyom gburugburu m.
JoeyE • November 4, 2013 na 9:01 pm • zaghachi
My nwunye emeghi chere na ọ ga-alụ a Yankee, Hispanic, Jewish Christian. Obi dị m ụtọ na ọ. :)
MJ • November 5, 2013 na 1:18 pm • zaghachi
apụta! Karịa gị maka-ekere òkè gị akụkọ ịhụnanya. Youth, ụmụ akwụkwọ mahadum na-eto eto nọ na-achọsi ike mkpa nke ndị dị otú ahụ ihe atụ! Amaara m ya n'ihi na a na-enwe a gbawara na-ekwu okwu banyere mmekọahụ, mkpakọrịta nwoke na nwaanyị na mmekọrịta ya na ha kemgbe 2003. Ga-maa-ekere òkè na ha na https://www.facebook.com/FMUniversity.
Chukwu gozie, njem!
zacharybrunotte • November 6, 2013 na 6:19 pm • zaghachi
M a na-acha ọcha nwoke a nwa nwunye. Anyị ka bụ ndị na-afọ mbụ, ma ọ dịghị akwa ụta! Anyị nwere onwe anyị aka nwa na ụzọ na anyị hụrụ anyị obere ezinụlọ. Dị ka Njem Lee, M nọchiri onwe m ịlụ nwanyị na nke m mba (M na-eche ya naanị eke). Kama m na mgbe otu ajụjụ ma ọ bụ na echiche nke ya na-adị “nri” ma ọ bụ “ezighị ezi.” Ọ bụ onye nke Chineke. WTF naanị ọsọ ahụ m na-ele!!
NTOBEKO • November 7, 2013 na 2:01 Abụ • zaghachi
Amen fam, Chineke otuto n'ihi iche iche amara na udo.
ugh • November 7, 2013 na 8:51 pm • zaghachi
Ị wifed ya? ugh, i nwere ike kwuru na nwunye?
Jenn • November 7, 2013 na 9:50 pm • zaghachi
M na-echeta mgbe ị na Jessica malitere-akpa! M anọgide ume ịhụ gị abụọ nọgidere na-na na na Chineke amara. Nke a bụ oké blog na m eche na ọ nwere ike na-gwakwara n'ihi na ọtụtụ ndị dị ka ha na-ahọrọ anya na obi nke ya kama ná mpụta.
aha: Reading Isi: 11/01/2013 – 11/12/2013 |
Joel • November 12, 2013 na 4:25 pm • zaghachi
“Gbaa ike ngwa ngwa kwupụta onye nzọpụta ma ọ bụrụ na ị hụ onye, na akuku nke na anya gị na-agba ọsọ na otu direction, ị ga-ewere a abụọ anya”
Rachael • November 27, 2013 na 4:08 pm • zaghachi
Kpomkwem a n'anya! M na-ekere òkè nke a na nne na nna m. My ndị nne na nna nwere mbipụta na eziokwu na m na-ahụ onwe m nwere mmasị na ụmụ okorobịa nke a dị iche iche agbụrụ. Ọ bụ ezie na m na-mgbe e nwere mmasi kasị Chineke ụmụ okorobịa, e nwere kemgbe mgbe m bụ mmasị na a nnọọ Chineke owo, kama n'ihi na ọ bụ na-acha ọcha nne na nna m kpamkpam asuan na machibidoro ọ bụla ụdị mmekọrịta gị na ha. M maa na-ekere òkè nke a na ha, Olileanya nke a ga-emeghe anya ha.
Tasi • November 30, 2013 na 11:15 pm • zaghachi
Nwanna, okwu dị ka agbụrụ mmekọrịta kwesịrị iwere nke anyị vocabs. E nwere nanị otu agbụrụ mmadụ.
Maurice • December 6, 2013 na 2:59 pm • zaghachi
Mgbe hụrụ ya na ụzọ. M akpa ókè agbụrụ, ma m na-eto eto, enwere a echiche ha na-akụziri anyị na anyị omenala na pụtara na-acha ọcha na ụmụ agbọghọ naanị gị n'anya na ịkpọ gị na ezinụlọ gị. Ha hụrụ n'anya na-emechi na. Ya mere m nne na nna ochie mgbe nile, sị “ma ọ bụrụ na ị chọrọ ka anyị na-na-abịa ka agbamakwụkwọ unu ma ọ bụ na-akwụ gị nleta gị n'ebe obibi gị, ịlụ di na nwunye a na-acha ọcha girl. N'ihi na ọ ga-ekwe ka anyị na-unu nso.”
Abby • December 9, 2013 na 2:55 pm • zaghachi
Ekwenyere m ịkwada lee
M na-eche na ọ bụrụ na ị hụrụ ya n'anya nke ukwuu, ọ Chineke na-achọ m na-ekwu ihe mere bụghị
Echere m na ọ na-Gods atụmatụ maka ị izute Jessica !
Abby • December 9, 2013 na 2:56 pm • zaghachi
BTW m gị n'anya music njem lee
aha: blog casserole – 12/13/2013 :: Carey Green - podcast emeputa, na-ede akwụkwọ, ọkà okwu, entrepreneur, alụmdi na nwunye & ezinụlọ nchịkwa, na omiiko-eso ụzọ Kraịst.
Livy • December 17, 2013 na 9:23 pm • zaghachi
Ọ na-akpa ọchị. M na-acha ọcha (akụkụ Hispanic, ma ọ dịghị onye ga-ama site na-achọ na m), na di m bụ na-acha ọcha, ma ọ bụ site na mba na m si n'obodo. Ọ bụ site n'ebe ndịda, na m si n'ebe ugwu. Anyị abụghị otu dị nnọọ n'ihi na anyị na anụ-aj u yiri. Anyị na-eje ije na ikwu okwu na usoro ihe dị iche iche paces, anyị na ezinụlọ anyị bụ n'ezie dị iche iche, ma anyị hụrụ n'anya onye ọ bụla ọzọ, na Chineke mere ka anyị ọnụ. ọdịbendị, ezie na, ọ na-ewe ukpụhọde anyị abụọ. na, tinyere na ịbụ dokwara kekọtara ijere Chineke, bụ ihe alụmdi na nwunye bụ ihe niile banyere! Ụtọ na ị gwa elu!
udo Sekhosana • January 13, 2014 na 5:47 Abụ • zaghachi
Anyị Awesome Chineke kere anyị n'onyinyo ya,otú agba ekwughị a thing.Love ị nwanne m nwoke
Corina • January 19, 2014 na 11:40 pm • zaghachi
Nke ahụ bụ ihe ndị kasị mma akụkọ………karịsịa nwunye gị…unu na-agọzi. …Amen na Ua akụkọ! !!!
Donald • January 25, 2014 na 7:17 pm • zaghachi
ekele maka na-ekwu okwu ruo
Amanda • January 26, 2014 na 9:16 pm • zaghachi
njem! Mbụ, gị music bụ mara mma ma na nrube egwu. M hụrụ n'anya ozi gị ikwusa ozi ọma na onye ọ bụla na bụla otu song. Gaa n'ihu dị ebube talent Chineke nyeworo gị! Agbụrụ mmekọrịta na alụmdi na nwunye na nnọọ ọmarịcha. Ọ ga mkpa bụ ihe mba na otu onye bụ, ma dị ka i kwuru, a Chineke na nwunye. M Kọkeshịan, ma na-abata African American ikom ndụ m nile. My ezinụlọ bụ nnọọ, ezigbo, ukwu ịnakwere nke a. :) Otú ọ dị, M ekpe ekpere ka Chineke na-eziga m nri onye, onye nwere gentlemen na chi àgwà. M na-atụsi anya a nwoke kwuru na ha hụrụ Kraịst n'anya karịa ha hụrụ m n'anya, nkwanye ùgwù, na-atọ ụtọ. Nke a meghere anya m bụ ezie na na-na-emeghe ka agbụrụ kama dị nnọọ nwa. Chineke gọzie ma unu ma Jessica!
Terrice • January 29, 2014 na 11:39 Abụ • zaghachi
Nke a bụ oké isiokwu… atọ m ụtọ n'ezie na-agụ gị blog. Daalụ maka ekere òkè gị akụkọ na ịbụ ya mere uzo. Jehova na-eji gị na ọtụtụ ihe magburu onwe ụzọ! Chukwu gozie!
skai • January 29, 2014 na 9:55 pm • zaghachi
Chaị, isiokwu a bụ egwu! Chineke otuto! njem, ị na-a n'ezie ezi dere nakwa. Adị m ka m na m nọ na-agụ a romance akwụkwọ ma ọ bụ ihe mgbe na-agụ gị post. Nza nke na-achịkwa ọchị na “awwwwww!” Akpa ọchị Daalụ maka ịbụ a Chineke mmetụta ọtụtụ asakde iso ese.
LeisleyAbrahams • January 30, 2014 na 2:41 Abụ • zaghachi
Ekele Njem nke ahụ bụ ụzọ kasị mma ọ e kọwaara m mgbe!!My girl na enyi m na-ekpe ekpere na-eche na Jehova na-esonụ step.I'm black full keisi ocha African na Ọ si white..I'm mgbe niile na-ajụjụ dị ka ihe mere m na-amasị ya na bụghị ụmụ agbọghọ m na akpụkpọ ma niile i ahụ na ya bụ a Chineke nwaanyị n'ọkụ maka Jesus, Hụrụ Jesus ihe karịrị ọ ga-ahụ m n'anya na nke ahụ bụ ihe m chọrọ na m life..You n'ezie sitere n'ike mmụọ nsọ m #wiseWordsTrip #NoWonderYouMyFavRapper
aha: Morning Mashup 01/31 | Theology Ihe
Aprilci • March 3, 2014 na 8:41 pm • zaghachi
M ụtọ na ị na-ewepụta oge si dee ihe a. Nke a post bụ ụdị random, mgbe n'ezie na-eche banyere ya (Heck, Ọ dịghị mgbe m ọbụna maara na nke a page adị ruo mgbe taa). Otú o sina dị, Obi dị m ụtọ na ị na dere ya…M na-eche na akụkụ bụ ihe ndị kpatara m mmasị kasị bụ dum mmasị nke. M lụrụ otu nwoke 5 afọ (anyị nwere 3 ụmụ ọnụ) na-achọghị ka di na nwunye ọzọ n'ihi na okwu ya—Abụghị m ya mmasị (ọ ga-eji a chocolate ice ude / vanilla ice ude ntụnyere na-agbali iji gosi na ya mgbe–ya mmasị bụ nwaanyị na a um….”mma” ahụ–M ga-ahapụ ya na na). The crazy ihe bụ na ọ na-eme n'ezie Christian RAP—(????). agbanyeghị, Obi dị m ụtọ ịhụ na ị gara banyere ụzọ ziri ezi—etinye ochicho Chineke n'elu gị na ọchịchọ anụ ahụ…..agbanyeghị, anọgide na-Na nwunye gị dị ka Christ Hụrụ na Church….M ga-ị na-niile n'ekpere m…..
ezi obi na-,
Your College Companion • April 17, 2014 na 5:49 pm • zaghachi
Na-emekarị m adịghị na-agụ isiokwu na blọọgụ, ma m chọrọ ikwu na nke a, dee-elu nke ukwuu na-amanye m ka m na-anya na na-eme otú ahụ! Your ide style e tụrụ m n'anya. Daalụ, dị mma nke ukwuu post.
NDỊ ỌZỌ • August 31, 2014 na 1:45 pm • zaghachi
yep. Otu ihe ahụ mere i di na nwunye a na-acha ọcha girl. Daalụ maka na-ekere òkè. Good agụ. ùgwù na-etinye. Chineke na-agọzi gị na ezinụlọ gị na nwanne. Toonụ Jehova, foreal n'agbanyeghị ịbụ.
Tgirl • November 22, 2014 na 9:24 pm • zaghachi
Ọfọn, M na-eche ndị mmadụ bụ ihe Akpata oyi wụrụ site eziokwu na ole na ole ezi nwa bụ ndị nwunye-u White inyom na-adịghị anyị ỌTỤTỤ nwa inyom. Ọ bụ mwute na agbụrụ comments adị, ma ọ dị nnọọ ka ndị na-eche, na karịsịa, inyom- na na Black. M nwere okpukpu abụọ ụkpụrụ m enyi nwoke bụ Latino & M Black na nke ahụ bụ na na na (maka Black inyom ụbọchị n'èzí agbụrụ ha). On ọzọ aka, mgbe m na-ahụ a ezigbo (nke dị ole na ole) Black nwoke a White / Other nwaanyị, M ka DANG ọzọ otu n'ime ụmụnna anyị na-arahụ…ugbu a na nke ahụ dị na-ekwu okwu site n'obi ịkpa ókè agbụrụ ma ọ bụ na. ọ bụ ihe ọ bụ.
aha: A di na Man | Isi akụkọ
Jeff • December 4, 2014 na 10:05 Abụ • zaghachi
hey Njem, ekele maka ihe ndị magburu onwe na echiche omume a ike ajụjụ. Dị ka ị na-m na-adịghị na-achụ ọ bụla nwunye mgbe m zutere Michelle. Ọ bụ dị na m bụ na dị na anyị hụrụ ụwa na otu ụzọ. Agbụrụ anyị bụ BỤGHỊ kasị dị iche iche ihe banyere anyị na okwukwe anyị bụ ihe na-ewetara anyị ịdị n'otu. M naanị dere na lụrụ a black inyom bụ ndị m lụrụ ndị ọzọ n'ihi ọrụ (nwa) na omenala anya karịa ibe mmasị. Ebe ọ bụ na enweghị m mmekọrịta ya na Chineke wezụga mgbe ụfọdụ chọọchị nleta m kwere m na-arịa ọrịa njikere maka alụmdi na nwunye. Mgbe anyị na ụcha akpụkpọ ahụ bụ otu ihe ahụ, anyị nwere nnọọ iche ụkpụrụ na mgbe anyị na-iche na ya gbara alụkwaghịm Chineke batara m gbajiri obi-agwọ m. M na-ekele maka nwunye m obi ike na-ele anya na m nwere na m adịghị gara aga na m n'anya gabiga acha. Ụmụ anyị na anyị na chọọchị ozi ga-egosipụta ịhụnanya nke Chineke maka ndị mmadụ ọ bụla na-eje ije nke ndụ. The ebe bụ Alaeze dị ka ụwa oké nhazi ụda na Jizọs dị ka Onyenwe nke niile.
Jeff • December 4, 2014 na 10:39 Abụ • zaghachi
hey Njem, ekele maka ihe ndị magburu onwe na echiche omume a siri isiokwu. Dị ka ị na-m na-adịghị na-achụ ọ bụla nwunye mgbe m zutere Michelle. Ọ bụ dị na m bụ na dị na anyị hụrụ ụwa na otu ụzọ. Agbụrụ anyị bụ BỤGHỊ kasị dị iche iche ihe banyere anyị na okwukwe anyị bụ ihe na-ewetara anyị ịdị n'otu. N'oge gara aga m dere na di na nwunye a na nwa nwaanyị nke ọrụ (nwa) na omenala na-atụ anya (ezinụlọ) karịa ibe n'anya. Ebe ọ bụ na enweghị m mmekọrịta ya na Chineke n'ofè-aga chọọchị, M na-arịa ọrịa na-akwadebe maka alụmdi na nwunye. Mgbe anyị na ụcha akpụkpọ ahụ bụ otu ihe ahụ, anyị nwere nnọọ iche ụkpụrụ na mgbe anyị na-iche na ya gbara alụkwaghịm Chineke batara m gbajiri obi-agwọ m.
M na-ekele maka nwunye m obi ike na-ele anya na m nwere na m adịghị gara aga na m n'anya gabiga acha. Ụmụ anyị na anyị na chọọchị ozi ga-egosipụta ịhụnanya nke Chineke maka ndị mmadụ ọ bụla na-eje ije nke ndụ na anyị oké mkpa maka ya amara. Alaeze bụ ụwa nnukwu nhazi ụda na Jizọs dị ka Onyenwe nke mba nile. Anyị ga-ekpe ekpere maka ezinụlọ gị na biko ekpe ekpere n'ihi anyị kwa.
Kennedy • December 18, 2014 na 2:13 Abụ • zaghachi
M sonyeere njem dịghị mgbe m na-eche na m nwere ike inwe onye dị ka ụfọdụ saịtị mgbe niile n'ihi lieying na-ezu ndị mmadụ m eleghara ụfọdụ SMS nwere ịntanetị ma ị na-apụghị ịgbanahụ atụmatụ Chineke otú dị ka na-akpali akpali m ihe m na-agụ ya na-azụ m iwu ọ bụla ebe onye hụrụ m n'anya ma ọ bụghị naanị m agbụrụ mgbe m nwetara ọcha American nwaanyị na-adịghị eche banyere agbụrụ,omenala naanị onye ịhụnanya & na-eche banyere ya “onye bụ m” na Chineke niile bụ omume ọ bụ m n'ezie nhọrọ.
Kennedy • December 18, 2014 na 2:19 Abụ • zaghachi
M sonyeere njem dịghị mgbe m na-eche na m nwere ike inwe onye n'eziokwu dị ka ụfọdụ saịtị mgbe niile n'ihi lier na-ezu ndị mmadụ m eleghara ụfọdụ SMS nwere ịntanetị kpọtụrụ ha ma ị na-apụghị ịgbanahụ atụmatụ Chineke nke a bụ dị ka na-akpali akpali m, m na-agụ ya ịbụ nwa m iwu ọ bụla ebe onye hụrụ m n'anya ma ọ bụghị naanị m agbụrụ mgbe m nwetara ọcha American nwaanyị na-adịghị eche banyere agbụrụ,Culture wdg… naanị onye ezi onye na & na-eche banyere ya “onye bụ m” na Chineke niile bụ omume ọ bụ m n'ezie nhọrọ.
Ryan • December 27, 2014 na 1:43 Abụ • zaghachi
M na-akpa na a nwa agbọghọ na-prefers nwa okorobịa… na m na-acha ọcha. Ọ gwara m na ya nwere mmasị m otutu, ma ọ bụ ka a nnukwu obi m. M na-atụ anya na otu ụbọchị ịlụ a girl. Ọ bụ n'ebe ahụ ọ bụla na-ezi na-agụ na a nke ma ọ bụ ihe ọ bụla ụdị ndụmọdụ?
Naleshia • January 8, 2015 na 11:37 pm • zaghachi
Ee Njem! M otu nwa nwaanyị na a predominately ọcha mahadum na ụdị mkparịta ụka mgbe nile elu n'etiti m gburugburu nke nwa girlfriends. Ọ bụ ezie na m nwere mmasị maka nwa ikom (M niile maka oji ịhụnanya), M mgbe niile na-emeghe ka na-akpa abụghị nke m agbụrụ n'ihi na ị dịghị mara onye Chineke nwere ike iji na-eme ka a dị iche na ndụ gị. M na-ahụ ndị bụ maka ndị ha na ha dabere na ha àgwà, agwa, ụkpụrụ ha, na nkwenkwe ha karịa ihe ọ bụla dị ka m na-mara ha. Ọdịdị na-mkpa na e nwere ndị ụfọdụ na-elekọta mmadụ ebube nke a na-aghọtahiekarị ma ọ bụrụ na ịrịba ama ndị ọzọ a zụlitere na a dị iche iche agbụrụ na omenala, ma ihe ndị a na-adịghị dealbreakers. Ọ bụrụ na ihe ọ bụla, ha ga-eme ka a mmekọrịta ọzọ na-akpali. Your akụkọ bụ ndị dị otú ahụ a mara mma akụkọ ịhụnanya na m enwe olileanya inweta otu ụbọchị. Na mkpokọta, i nwere ike ọ gaghị enyere onye ị na-ada na ịhụnanya na-, n'agbanyeghị ma ọ bụrụ na ha na nwa, ọcha, odo, Barney purple, ma ọ bụ Ninja Turtle green. Ịhụnanya bụ eluigwe na ala na karịrị ihe ethnicities. Anyị dị ka ndị Kraịst na-azọrọ na nile n'anya ọbụna na anyị dị iche iche. Mgbe ụfọdụ, mkpụrụ obi gị ma ọ bụ nwunye, ezi egwuregwu, ndụ ibe, na enyi kasị mma mmadụ bụ onye na kpamkpam na-abụghị nke onye ị mgbe ekere onwe gị ịbụ na. Ọ na-eme m ọchị ịnụ na ịmakụ otú ị na-adọrọ mmasị Jessica maka umeala n'obi, ọmịiko, na-atụ egwu Chineke nwanyị ahụ na ọ bụ na ka bụ. Your n'otu bụ ezi agba na gị na-akọrọ okwukwe na Chineke karịrị ihe iche. -agọzi.
Mark • February 22, 2015 na 3:17 Abụ • zaghachi
hey, ana m aghọta gị. M nwere Australian Amaala nketa m na-chọrọ ịlụ ọzọ Koori (Amaala) ma n'ihi na omenala na nna nna okpukpe ya mere ka ọ dị nnọọ ike. M bịara ịlụ a Anglo Red isi. Ma ọ hụrụ n'anya n'anya Jesus na nke ahụ bụ ihe dị mkpa.
Isaac • April 9, 2015 na 11:50 pm • zaghachi
Gọziri agọzi mara adịghị m na-ezighị ezi track ka m ga-esi nso oge m ga-eme ka a nhọrọ na ndụ ibe!
jamel • July 12, 2015 na 9:17 Abụ • zaghachi
cece • September 24, 2015 na 3:56 pm • zaghachi
Chineke na-agọzi gị na ezinụlọ gị na Jizọs aha ya dịghị mkpa bụ ihe bulie ị na-ọ dị mkpa na otú ha si emeso unu, unu bụ ndị kasị mma pastọ mgbe ezigbo
Ezra • November 6, 2015 na 3:17 pm • zaghachi
"Ma mgbe anyanwụ na-agbada, a ụra miri emi dakwasiri Abram; na, ọ, ihe egwu nke oké ọchịchịrị dakwasi ya. Ọ si Abram, Mara nke a gbaa ibé na nkpuru-gi gābu-kwa-ọbìa a n'ala na-abụghị nke ha, na a ga na-ejere ha ozi; na ha ga-emekpa ha nnù arọ; Na kwa na mba, onye ha ga-eje ozi, m ga-ekpe ikpe: emesia agēme ha uku puta umi. "
Dị ka Song nke Solomon 1:4-6:
"Adị m oji, ma maa mma nke ukwuu, O unu umu-ndinyom nke Jerusalem, ka ulo-ikwū nile nke Kida, dị ka ákwà-nkwuba nke Solomon. Lee bụghị m, n'ihi na m na nwa, n'ihi na anyanwụ kwa anya n'ahụ m: nne m ụmụ iwe m; ha mere m onye nche nke ubi-vine; ma mụ onwe m ubi-vine nwere m nọ. "
ọzọ Numbers 12:10-15 na-ekwu na Mariam na-bụrụ ọnụ site na Chineke mgbe ọ disrespects amụma ya, otú Mariam e yipụ ya hue ma ọ bụ na agba na-aghọ ọcha dị ka snow. The asusu nke a mmewere bụ na Ndị Kraịst na-gburu dum omenala na ndị ọcha-ekwu na ha na-họọrọ ndị mmadụ, Mgbe Bible na-bụ Hebrew akwụkwọ banyere otu onye Ijipt na Chineke onye ezipụta na Israel / Jacob mụụrụ 12 ndikom na umu-emepụta ebo Israel onye bụ nwa, dị ka ndị òtù nile nke Nsọ Lineage.
M mara onye m. Na m na-adịghị na-emegide Nubian ndị mmadụ na-akpa / ịlụ ndị ọcha. M ga-mgbe ya, ma ọ dị nnọọ gbapụrụ ọsọ elu usoro, nke mere na udo nwere ike eketa Earth kama ihe anyị na-atachi ugbu a.
Netan Yonas • November 26, 2015 na 1:01 pm • zaghachi
nwere ike Chineke na-agọzi u & Ua ezinụlọ continously
na nke kacha mma
PK • December 24, 2015 na 3:08 pm • zaghachi
Obi dị m ụtọ na m hụrụ nke a post. M na-achọ ndị ọzọ ndị mmadụ na agbụrụ mmekọrịta owụt them9 n'ụzọ a vesos enwe na-tinyere ala ndị ọzọ dị iche iche nke ndị mmadụ. Na niile eziokwu, Chineke na-arụ ọrụ na obi m mgbe ọ na-abịa a isiokwu. M na-adịghị eche na ihe nile banyere onye onye il / lụrụ agbụrụ na-ekwu okwu. Otú ọ dị, ụfọdụ na-adịghị mma encounters na agbụrụ di na nwunye na ugbu a mgbochi nwa nwaanyị ije hapụrụ m jaded. Ma-ekele Chineke maka ya amara, n'ihi na Ọ na-eweghachiri na obi m na-emeghe anya m na-ahụ ndị mmadụ na alụmdi na nwunye na ụzọ ziri ezi – ọbụna ndị na-egosipụta àgwà ọjọọ kwupụta agbụrụ m nke.
ion MARVO • January 3, 2016 na 4:18 pm • zaghachi
achọ foward ịhụ a na-acha ọcha na nwaanyị ọ ga-amasị na-alụ m n'ihi onye m ka mma ma ọ bụ kasị njọ ọ bụ m nrọ
ma ọ bụ • January 25, 2016 na 1:44 pm • zaghachi
Ihe m nwere ikwu bụ nnọọ mwute .. M m si n'ebe ọwụwa anyanwụ nke ụwa na m m lụrụ a na-acha ọcha girl.
ya siri ike na cultrual dị iche.. Anyị na-na-na ịgba alụkwaghịm.
My ezinụlọ doesnt chọrọ izute m na m mgbe ọ bụla gbanwee na ezinụlọ ya.
Ọ bụ zuru okè inyom m nwere ike mgbe nwere, anyị na-alụkwaghịm n'ihi agbụrụ okwu..
Nne na nna m na-arịa ọrịa na ha chọrọ ileta US na ha cant ndụ na nwunye m. Abụ m onyeisi ezinụlọ otú ahụ ka m ga-eme takecare nke ezinụlọ m backhome.
im obi gbawara, bibiri ugbu becuase ya na-eme ugbu a anyị na-aga thru ịgba alụkwaghịm .
M ga-ahụ ya n'anya
onyinye • March 5, 2016 na 1:59 pm • zaghachi
Chaị. Nke ahụ bụ nnọọ dị ike, Na-agba ume na ọ na-emeghe anya anyị na-ahụ anyị na-agaghị ahụ anya n'ihi na mmadụ abụọ na Chineke dịrị n'otu ha iji mezuo nzube ya.
TheHonestTruth • March 27, 2016 na 1:15 pm • zaghachi
Ọfọn m a na-acha ọcha Good nwoke na m ka na-enweghị ike izute a Good nwaanyị dajụọ na ebe ọ bụ na ndị inyom taa na-ukwuu dị iche iche karịa gara aga.
Eric • Ka 2, 2016 na 12:22 pm • zaghachi
M n'ezie nwere ike na-eche na ihe agbụrụ nwunye gị bụ, ma ọ bụ ịrịba ịnụ ị lebara a (ma ọ bụ ọ bụla) nke na-ndị dị otú ahụ dị umeala n'obi na ahụ iru ala. Daalụ maka na-achọ Chineke ụzọ.
Brooke • June 4, 2016 na 5:06 pm • zaghachi
Site niile ndekọ ndị okwu nwere ike ịbụ ọ dịghị truer, maka onye kwere ekwe ma ọ bụ na. M ga-mesie ị na-eji n'ebe kpọmkwem,” Ọ dịghị mgbe m na-elekọta, n'ezie, ihe Agbụrụ nwunye m na-, dị ka m akpa oke ga hụrụ ya dị ka nwa.” dị ka ọtụtụ ndị, M stuggled m Faith dị ka na-achọ ọrụ na uche Ya, ma m kwere na ihe niile dị m, na Ọ ga-eziga m ọchịchọ nke obi m ( ọ bụghị naanị a onye mmasị) n'ihi na m, M kwere na ọ bụ ebe iche nke m ndidi na / ma ọ bụ Faith na-emepe emepe. Ka m na-ekweta na unu akụkọ dị ka ọ bụ unu àmà, M dokwara jide akaụntụ eche ihe yiri ka ndị agaghị ekwe omume n'ihi na ọ na-edu site a ọchịchọ, a mkpa, ọ bụghị naanị a n'ụkọ. Na-ọzọ kpọmkwem: M ga-ahụ n'anya na-na ụlọ ọrụ ndị David Beckham, Chris Hemsworth, na Ben Affleck (mgbe otu), ma m nwere nweghị mmasị ịlụ ha; ọ bụghị mgbe obi m na-achọ ịma mma, ike, agwa, na bu dìnkpà nke ebube-kere nwa nwoke! Ama anyị nọgidere na a ná mmehie, a eleghị anya ga-abụ a ukwuu nchegbu, ma na a ụwa na-ndị dị otú ahụ a mara mma mere mmadụ e rere, ihere, dọ, lelịa, etc…M ịhụ dịghị mkpa bụghị iji wuchaa njem mụ na ya zitere Ya. ma lezie, maka m, nyere taa disconcerning ihe atụ nke a nwa nwoke, M chọrọ ka nwa m nwoke na-ahụ na ihe ozugbo bụ, (a ezi mmadụ ka nna ya tupu ya anwụọ) nwere ike ka na-na ga-ọzọ…….
Marwa • June 25, 2016 na 2:37 pm • zaghachi
Ọ bụ nnọọ oké ọṅụ na ngọzi m ndụ, i na di m nwere na-amalite ịmụ nwa maka 8years ugbu a n'ihi na m enweghi m ga-amụ na ya ekwurịta nsogbu kwa ụbọchị n'ụlọ m,otú m gara a nwanyi enyi Florida,na ọ bịakwutere na ihe echiche nke n'ịkpa a nwa nke m mgbe nwere n'uche,na now i nwetara enweghị oke karịa ime n'ihi na a na nwa na m ịtụnanya na ihe niile gara mfe na taa m obi ụtọ na Hansom nwata(amamihe)i nakweere si Inter mba nwa nkuchi center.
Mary • June 28, 2016 na 10:22 Abụ • zaghachi
Nke a na-eme m nnọọ relief.That bụ ezigbo mkpebi na-eme ka. Ị maghị ma onye kwesịrị ekwesị na-abịa around.No n'agbanyeghị ihe agbụrụ m ga-arapara na dị ka ihe African American.That m adịghị mgbe niile nwere na-na m nkasi obi mpaghara na m nwere ike ịga igbe. M kpọrọ ihe n'ezie na nkwupụta a, i nyere . Ka Chineke gọzie gị na ezinụlọ gị na ọtụtụ ọtụtụ ngọzi na ndụ gị.
Andrew • August 18, 2016 na 1:04 pm • zaghachi
Marcus • September 13, 2016 na 9:00 Abụ • zaghachi
Great unu niile ndị na-lụrụ di na nwunye ụmụ Chineke. Anyị kwesịrị ịlụ ndị maara otú anyị n'anya ma na GA hụrụ anyị n'anya! Nke a info bụ maka daters naanị–abụghị di na nwunye; otú, ma ọ bụrụ na ị na-lụrụ di na nwunye, anọ lụrụ di na nwunye, BIKO! Ọ bụrụ na ị na-akpa, mgbe na-arịọ Chineke ka na-egosi na onye ị na-azọrọ na ịlụ di na nwunye–n'ihi na ị na-amaghị ezi obi na-! Ndị mmadụ pụrụ igwu egwu mma-mma / ihu abụọ nke ọma n'ihi na dị iche iche ihe na ghọgbuo gị, ndị mmadụ nwere ike na-ezi ndị mmadụ(ma ọ bụghị na otu onye ụzọ na Chineke nwere n'ihi na ị–Dakọtara n'ụzọ ime mmụọ–ọbụna 2 ụmụ Chineke nwere ike 2 ụzọ dị iche iche na-adịghị n'ahịrị; echeta amaokwu Baịbụl ebe m kwere na-eso ụzọ asua a onye nke Chineke n'ihi na ọ na-ejikọta ya na ha ozugbo; Jesus’ azịza na-egosi na ndị mmadụ nwere ike na-anabata ọzọ Chineke, ma na-emegide; mgbe ọzọ, Chineke gwara Hosea ịlụ a akwụna–ma ọ bụrụ na m na-echeta na-eje ozi m n'ụzọ ziri ezi). Ya mere,, site n'ịhọrọ na-ezighị ezi(mgbe ụfọdụ, a nwa Chineke nwere ike ịbụ na-ezighị ezi n'ihi na ị), i nwere ike na-atụ uche si na ngọzi nke nwere ike na a ga-agbachi na nri onye. Ị pụrụ ọbụna na-ewetara a bụrụ ọnụ ka ị; gị na na ike ịbụ na-arịa ọrịa ma ọ bụ ụfọdụ pụrụ ịnwụ tupu ị; ị nwere ike ghara ịbụ nri nne na nna gị na nwa; ị nwere ike na-adịghị emepụta ma ọ bụ na-adịghị emepụta ihe a ogologo oge; ibe unu n'anya na ihe bụ ka ezi; i nwere ike onye ghọgburu gị(e nwere ndị amoosu, wizards, ihu abụọ, eme ihe ike emegbu, ọ hụghị gị n'anya naggers, cheaters, ascribers emeghe mmekọahụ ma ọ bụ LGBT lifestyles, uche na-ejighị n'aka ndị mmadụ, ascribers na idina anụmanụ–onye na-eji naanị ndị ezinụlọ Pita dị ka a cover, -ekweghị na Chineke ma ọ bụ agnostics–onye ji okpukpe-emeri unu n'elu, ụgha, na narcissistic ma ọ bụ ịchọ ọdịmma onwe, aṅụrụma na drugheads, conpeople ma na-iwu na-akwadoghị ego, ọgọ mmụọ / satanists, ume ngwu, na ụmụaka–ezighị ezi na-ekwu okwu, n'ezie, ọnụ emegbu, cursers, ndị ga-dịghị mgbe chegharịa, Oghere Usoro egbu, pedophiles / ugboro ndị mmadụ, etc. si n'ebe).
Ị na-arịọ Chineke, n'ihi na O nwere a atụmatụ maka na ị na na n'ihi na(ma ọ bụrụ na ị gbaa alụkwaghịm maka ihe ọ bụla mere) ọ bụ m ji ezi obi na okwukwe na ị na-agaghị kwesŽrŽ ka ọdọ ọzọ ruo mgbe nwunye gị na-anwụ anwụ(ma ọ bụ nwee mmekọahụ ọzọ, ndị bụ ndị aghụghọ). Ị na-agaghị na-azọrọ na e nweta gbara alụkwaghịm na-oge(ma e wezụga n'ihi ịkwa ekwesịghị ntụkwasị obi), ma ị ga-enweghị mmekọahụ ma ọ bụ alụmdi na nwunye ma ọ bụrụ na ị na-eme ihe ụfọdụ mere ka. Ị pụrụ ikwu n'eziokwu na ọ bụrụ na ị(ma ọ bụrụ na ị ga-esi a egwu nke a na nwunye na ị pụghị iri ya–ọ na-ekwesịghị ime eme ọbụna mgbe, ma ihe na-kacha na-aga ime) ma ọ bụ nwunye gị bụ ihe mere ị ga-esi gbara alụkwaghịm na ị nwere ike ịga na-enweghị alụmdi na nwunye na mmekọahụ maka oge nke nwere ike na-aga ná mpụga gị mmekọahụ praịm(oge a nwere ike ịbụ ọtụtụ iri afọ)?! Ọ bụ ya mere i kwesịrị ịjụ CHINEKE WHO i kwesịrị ịlụ! Ọ-ezere mmehie mgbe e mesịrị(n'ihi na i nwere ike ma ọ bụ ghara inwe kechioma, ma Ọ maara) na gị Christian njem maximized! Gịnị ma ọ bụrụ na ọ bụghị Chineke na-aza gị n'alụmdi na nwunye nke(ụmụaka, oke) ekpere–ime ka ị-aghọrọ mkpụrụ ọ na-na na akụ na-ahọrọ ịlụ maka onwe onye mere naanị?!
Marcus • September 13, 2016 na 10:59 Abụ • zaghachi
On ọzọ nke: e nwere ụfọdụ di na nwunye(gwụla ma ị maara Chineke bịanyere aka anya na ha–na-arịọ Ya iji jide n'aka; adịghị maa) na ike-arịọ maka nsogbu: 1. BMWF di na nwunye di America: anyị na-ebi n'ụwa nke na-acha ọcha na-aga n'ihu, ebumnobi ịkpa ókè agbụrụ! White racists bụ ike ike na ịkpa ókè agbụrụ karịa ìgwè ọ bụla m na mgbe hụrụ! Na nwa nwoke bụ onye iro nọmba 1! Ha na-etinye na-asọ oyi ihe na nri gị, ojii na ha ụmụaka nwere ike inwe ruru unyi / izizi-igosipụta hugs na handshakes, spells / nkọcha nwere ike na-etinye na nwoke ma ọ bụ ya na ụmụ, cops profaịlụ na-emegbukwa nwa ikom nnọọ aggressively ma ọ bụrụ na a BMWF alụmdi na nwunye na-kwusara dị ka ị na-azọrọ na, ha na-agọnahụ ezinụlọ, ha “nepotize” dị ọcha na-acha ọcha ndị òtù ezinụlọ(ụmụaka, oke) na ịkpa ókè megide mbuaha òtù(ụmụaka) na nwa nwoke, ha ịtamu ntamu megide ha “iro”, ha na-awakpo na / ma ọ bụ gbuo nwa ikom, ụfọdụ nwanne / nwanne mmekọrịta ga-aghọ imebi ma ọ bụ inimical na fọrọ nke nta niile na-acha ọcha nne / nwanne iwu ga-enwe ma ọ bụ ihe inimical na mmekọrịta ha na nwa counterpart, nkụzi subtly villify, etc. Ị pụrụ ichetụ ikekwe gị na na-enweghị / a ọnụ ala na mmekọrịta ha na nne nwa ezinụlọ? na Christmas: ọcha ụmụ ga-esi a $150 onyinye a so, ma gị na na na- $25 onyinye ma ọ bụ ihe ọ bụla. Ị pụrụ ichetụ ma ọ bụrụ na ihe mere onye ị hụrụ n'anya(di ma ọ bụ nwa) na-eche ma gị na ezinụlọ gị nwere ihe na-eme na ya ma ghara inwe ike iji gosi na ya? Ọtụtụ n'ime ihe ndị a nwere ike na-atụ anya; mana ọzọkwa, ndị di na nwunye ga-emeso ihe ọzọ di na nwunye ga-emeso, oke! ụgwọ, anụ ụlọ n'ụlọ / onwunwe-elekọta, ezinụlọ expenditures(mgbe ụfọdụ na-atụghị anya), ụmụaka ụka(AKPAN na-achọ ndị ọzọ oge karịa ndị ọzọ–ọbụna na-agba ume na nwa gị na-aghọta na ịkpa ókè agbụrụ ọcha na-ahụ ha dị ka nwa na-ịnọgide na-enwe nguzozi na ọ / ọ hụrụ n'anya n'anya ma nne na nna na mmadụ niile ahụ karị), ọrụ, anọkọ na ndị enyi gị ka ha nọgide na-enyi gị, etc. E nke ukwuu na-aga na-eme ka alụmdi na nwunye obi ụtọ, ma ọ bụrụ na ọ bụghị Chineke na ichi ndị ya!
2. Alụmdi na Nwunye ebe a nnukwu ọdịiche na okpukpe na nkà ihe ọmụma ma ọ bụ ebe isi ihe nke ozizi okpukpe na-abụghị ma ọ bụ dakọtara. Dị nnọọ ịjụ eze Solomon. Kraịst ma Muslim. Christian na Buddha. Christian na okpukpe Hindu. Christian na ekweghị na Chineke. Christian na Ofufe Setan(Illuminati, Freemasonry, na ha ọzọ ịrọ òtù na agbatị). Jide n'aka na Chineke chọrọ ka ị n'ebe ahu n'iru-abanye, n'ihi na Chineke nwere ike iji gị iji tọghata onye ma ọ bụ onye ọzọ gị n'ije gị ga-ege ntị!
Brian • December 28, 2016 na 6:25 Abụ • zaghachi
Good isiokwu, ọ na nkwanye ùgwù na-ekwu ka mkpụrụ obi m.
Ka Chineke gọzie gị na ezinụlọ gị ruo mgbe ebighị ebi ndụ ebighị ebi.
Joel • January 2, 2017 na 4:03 pm • zaghachi
Nke a bụ otú Awesome. ahụrụ m ya n'anya. Chukwu gozie gị.
Mbah Joel • January 2, 2017 na 4:04 pm • zaghachi
Nke a bụ otú Awesome. ahụrụ m ya n'anya. Chineke
JoshuaKirkland • January 7, 2017 na 2:42 pm • zaghachi
Ana m aja gị mbanye, mkpebi siri ike, njikere, & okwukwe. The eziokwu na nke a ọrịa i nwere ihe otiti gị & mere n'ezie ka ihe na-esiri gị bụ nnọọ crazy! Otú ọ dị, ị perserve & agha nile nke na & anọgide na-mezue ihe Chineke chọrọ nke ị. Mgbe m nụrụ na Unashamed Tour of 2012 bụ ikpeazụ gị otu tour, uche m malitere iche dị ka ihe mere na ị na-nghọta ya. Ozugbo m chọpụtara na i nwere gị ike ọgwụgwụ aghara & na ị na-akasiakde a atụrụ ụwa, M malitere ịghọta na Chineke nwere ọzọ nzube ị. Mgbe Rise e wepụtara, M bụ SOOOO obi ụtọ! Man, M bụ soooooo mama! Iji agwa unu eziokwu, The Good Life bụ 1st Christian Hip-Hop album m gere ntị & zụrụ. Kemgbe ahụ, M na a na-ekirikarị na na hip iwuli elu music na-eto Jesus. Your music kemgbe ka amara na ndụ m. M ekpe ekpere ka ị na-anọgide na-alụ ọgụ site na gị siiri na mmetụta alaeze! #116
Blosm • March 8, 2017 na 3:10 pm • zaghachi
Wonderful akụkọ. Obi dị m ụtọ ma ọ bụ na ị na. M lụrụ m agbụrụ ma nke ahụ na-azọpụta m si anuri ndụ m na-ebi. M naanị nọ n'alụmdi na nwunye m na-echebe m ụmụaka ga-eme n'ọdịnihu na Chineke kpọrọ ịgba alụkwaghịm asị. M na-ebi a hell na-enwe olileanya na-aga ebe.
Achi • Ka 7, 2017 na 5:57 pm • zaghachi
Ịhụnanya bụ ihe niile…agba bụ ihe ọ bụla…
LaKiKI • Ka 11, 2017 na 9:57 pm • zaghachi
Ònye ka ị na-agbalị ka o doo gị oke? ị, ma ọ bụ anyị? Ọ bụrụ na ị n'ezie ẹmende nwunye gị, n'ihi na Chineke isiokwu a ga-adịghị adị. Ị adịghị mkpa ikike. Ee, M n'aka na e nwere ọtụtụ Black Nsọpụrụ inyom na ndị dị nnọọ ka ịtụnanya dị ka nwaanyị na ị họọrọ. Ma, ị na-achọghị ka ha, ma ọ bụ nwere mmasị. Ọchịchọ gị bụ nwunye gị. Nke a dị mma. Dị nnọọ na-akwụsị na-agbalị kwadoo ya, dị ka ọ bụ nzuzu na ndisụhọrede.
M na-guessing na-ekwu na cosign gị ọnọdụ ina posted, ma m ga-agbalị ọzọ. Free okwu ihe!
James • January 23, 2018 na 1:46 pm • zaghachi
ha ha n'ezie. Ị mkpa na-aga Chineke na-esi na okwu. M Na-eche na ị ma ihe ị na-ekwu okwu banyere eme ka i na o doro anya na aghọtaghị nke a. Im na-eche echiche i Na-aghọta nzube nke ya na-eme nke a bụ inyere na-agba ndị ọzọ na otu ọnọdụ. The ụzọ ị bịara anya na-ada ka ya iwe n'obi ma ọ bụ amaghị ma ọ bụ ma eleghị anya ọbụna prejudence onwe ya n'ihi na ị na-eche na ọ na-agbalị-atụfu ya na iche iche na-eche ihu ọ bụ na a na-acha ọcha nwaanyị na WTF bụghị ikpe. Ọ na-ada ka ị na ewere ya na a na-acha ọcha girl oge.
Tiffany • June 27, 2017 na 5:55 Abụ • zaghachi
Gịnị bụ elu Njem. Nke a bụ ịkụ gọlfụ. M ụtọ isiokwu a. Ọ bụ ezie na m na-afọ n'azụ. akpa ọchị. Ma n'eziokwu na e nwere ihe mere m na-dị nnọọ hụrụ nke a. My di ọcha na mụ onwe m kwa-eto na-eche onwe m na a nwa nwoke. Ma Chineke kere m ịdị iche. Ọbụna na-eto eto m jụụ eyen na ngọngọ, mara dị ka otu n'ime fellas. Mgbe ahụ na mahadum ndị fellas aha mgbanwe mgbe ha chere na m bụ cute. Ma n'ihi na m na a mara na bụ ike maka a nwa nwoke na-akwado m na. N'ihi ya, m wee gọzie na 30. 3 afọ ike na a mara mma obere nwa. M ekpe ekpere naanị ụwa nwere ike na-ezukọta na a mara ịhụnanya nwere dịghị agba. Chukwu gozie
P.S. My Lil nwanne nwunye bụ Asian, lụrụ di na nwunye 9 afọ. Mama m na-akpọ anyị ya agbaze ite nke ịhụnanya.
CAPTJIMJIMANAMBO • July 16, 2017 na 7:59 Abụ • zaghachi
CHUKWU GOZIE GỊ!
Unu gọziri agọzi ME.
Millz • August 5, 2017 na 10:35 Abụ • zaghachi
Abụọ na nwunye m na m na-ekele dị otú ahụ kwuo ka anyị na-eche ndị a na ụdị akụkọ dị ka “touchy” dị ka ha nwere ike dị mkpa ka a na-agwa anyị na otu na ndị ọzọ ihe dị ka Kraịst. M a-eto eto na nwa nwoke onwe m, nwunye m, onye na-acha ọcha, bụ asaa afọ tọrọ m. Anyị ma n'anya Christ miri. Dị ka anyị kweere n'ezie na site n'ekpere Kraịst nyere anyị ọ bụla ọzọ. Anyị ugbu a ndị nne na nna nke anọ mara mma ụmụ a blended ezinụlọ. Nke a n'otu Chineke kere anyị na-abịaghị na ya mgbochi ndị anyị furu efu ndị enyi na ezinụlọ n'ụzọ nke na anyị ka na-ekpe ekpere maka. Nke bụ eziokwu bụ nzube Chineke maka anyị bụ mgbe ihe anyị na-bu n'obi. Na Bible bụ chock-jupụtara ndapụta na-ekwu na anyị na atumatu nke Chineke na Ya Chineke okè. (Hosea / Goma bụ ihe nlereanya zuru okè)
M na-eche ụwa nke agbụrụ ịlụ e mebiri site na ejikọ ekworo, asị, ọtụtụ ndị ọzọ na-emebi iwu na ihe ọjọọ ihe nke a na-emekpa echiche nke ụmụ mmadụ kemgbe anyị inception. Ọ bụ ihe mere Bible nke bụ kasị ukwuu akụkọ ịhụnanya na ha niile ka resonates ọbụna mgbe a millennias.
My na nwunye m nwere ahụmahụ a ịkpọasị mbụ aka si ma anyị omenala na ọbụna ndị ọzọ ọ bụghị onwe anyị. Ọ bụ ọbụna ọzọ na-akpali mgbe ọ bụ site a onye na-azọrọ na-Kraịst ma ọ bụ ndị na-esichara ha onwe ha amaghị. Mgbe ihe ndị a ruo anyị anyị na-ahụ na ọ dị ka a ngọzi n'ihi na anyị na-aghọta nnọọ otú anyị na-na-anụ olu Chineke na ọ bụghị onwe anyị. ọ (Christ) na ndị nnọọ oge akụrisị anyị na Galeshia 2:20, ọ bụ mgbe ahụ anyị na-aghọta na-agha na anyị nwere ike ịchọ ka a abụghị nke anyị na-alụ ọgụ. Ọ na-eme ka ọ dịkwuo mfe ịnụ na? Ọbụghị ncha ncha, ha na-ekpughe ihe ọzọ ajụjụ ka: “Ọ dị mma, M nwere ike na-alụ ọgụ azụ ma ihe banyere ụmụ m? Olee otú m na-echebe ha si ịkpọasị ha na-ahụ?
Nke ahụ bụ mgbe ị na-aghọta na alụmdi na nwunye gị abụghị naanị a onye, anụ ahụ na njem ma a ime mmụọ.
Mụ na nwunye m na-anyị afọ nke itoolu na alụmdi na nwunye (fanye kụrụ aka) na anyị anaghị ọzọ siri ike na ndị ọzọ n'otu n'ihi na anyị na-ahụ anyị ozi ugbu a, ọ pụrụ ịbụ ya mere ọtụtụ ihe ndị ọzọ ghọtakwuo. Mgbe Bible na-ekwu na anyị bụ ìhè nke ụwa, anyị bụ n'ezie! Na ụfọdụ ndị nwere ike ghọtara na, ma mgbe ahụ, ị ​​na-ahụ ndị ole na ole ndị na-asị onwe ha: “Yeah! Ihe ị na abụọ nwere m chọrọ ahụ!”
Nwanne m Njem na ya magburu onwe ya na ezinụlọ na ndị ikwu m na-ekwu nke a,
Njem gị ka malitere nwanne m nwoke na nwanne . Ike n'ime Onyenwe anyị na nime ike nke ike-ya. Ọ ga-eduzi gị otú ahụ ogologo oge dị ka ị na-akwụsị na-agba ọsọ Ya.
A ga-enwe ọtụtụ ihe mgbochi m maara ụfọdụ eleghị anya ị na-ama nwetara ha bi na South. Ma ị bụ otu ihe atụ nke ezi ịma mma nke Chineke anyị, na Onyenwe anyị Jizọs Kraịst. Na ịhụnanya na alụmdi na nwunye a na-egosi kacha mma, N'ihi na Bible kwuru otutu ugboro na “N'ihi na ọ dịghị akwanyere onye na Chineke” – Ndị Rom 2:11
Chineke gọzie gị na ndị ọzọ niile na nke a post onye aha Jesus Christ
Achi • September 22, 2017 na 11:55 Abụ • zaghachi
M nwere ike ime otu ihe ahụ Godwilling
Dawnn • September 22, 2017 na 3:16 pm • zaghachi
Bro, M otú a kpọrọ ihe na-akwanyere gị ùgwù a post. M nụrụ m mma òkè nke mere oji ikom ịlụ nwaanyị nke a dị iche iche agbụrụ / agbụrụ. Nke a bụ otu n'ime ugboro ole na ole m na na na na nụrụ a brotha’ gosi mkpa nke àgwà Chineke, n'elu edebere mere inyom nke otu agbụrụ dị mma karịa ndị inyom nke ọzọ agbụrụ. Na n'ezie ọ bụ banyere Alaeze nzube n'elu mmasị. Ka Chineke anyị nọgide na-agọzi gị, nwunye gị na ndị ezinụlọ!
Trinitee Hudson • October 20, 2017 na 12:29 Abụ • zaghachi
Nwanne m nwoke na Christ. Ana m gọziri agọzi site na isiokwu a. Daalụ maka ikwe ka okwu na-akụziri na idozi nsogbu ndị mmadụ na-adịghị aghọta.
M na ume gị stance n'alụmdi na nwunye gị ma na-gị na-eje ozi eziokwu. Chineke na-agọzi gị na ezinụlọ gị.
Joshua Fordham • January 6, 2018 na 3:03 pm • zaghachi
M na-eche na isiokwu a dị mkpa. Ahụtụbeghị m a ìgwè mmadụ na-eche na ọ dị mkpa ziri ezi ọchịchọ ịlụ ọcha dị ka m hụrụ na nwa ndị mmadụ ọzọ kpọmkwem nwa ikom. Achọpụtara m na nwa ndị na-akpa na ịlụ di na nwunye na-abụghị na-acha ọcha dị iche iche na-adịghị ziri ezi ihe mere ha lụrụ di na nwunye na-abụghị na-acha ọcha onye. Ọ bụrụ na ha na-eme, ọ bụghị na ogo na nwa ndị lụrụ di na nwunye na-acha ọcha.
M nnọọ nwere a ike ikweta na ndị niile na agbụrụ nke ndị inyom na na ụlọ akwụkwọ na-na-ejere Chineke ozi na-ahụ ya n'anya na-arụrụ ya enwetaghị gị anya ma na-acha ọcha girl, nwaanyị onye e kwuru na na-na nwa nwoke kryptonite, na-ejide gị anya maka alụmdi na nwunye. Ị dị nnọọ chọrọ ịlụ na-acha ọcha na-eme ka Chineke na dị ka a ga-esi iyi ka ọ bụla nke a bụ otú ahụ ka Chineke họpụtara mgbe nke a bụ omume predates ohu.
Ọ bụrụ na ị chọrọ na-akpa na-acha ọcha na na ma dee otu isiokwu pụtara na e nwere ihe bụghị-edozi ná mmụọ gị.
Amen • January 10, 2018 na 1:04 pm • zaghachi
Sịkwa ihe mere ọtụtụ nwa inyom na-were ya iwe ụbọchị ndị a.
Joshua Oké Ifufe • February 3, 2018 na 1:50 Abụ • zaghachi
Ekwenyere m na gị, njem Lee. M mara na onye ahụ dum na-ugbua ka enwere spirit, mkpụrụ obi, ma ahụ. Ya mere, anyị bụ ndị mmụọ Nigeria, na mkpụrụ obi, na anyị na-ebi n'ime ahu. Ọ bụ nnọọ nzukọ na ọtụtụ ndị na-ele anya na ndị “ụlọ” ma ihe dị mkpa bụ mmụọ / obi nke onye. M ga-nnọọ n'anya re-mesie nke a n'ihi na onye si n'ebe na-agụ m ikwu ebe a. A nwoke bụ a spirit-eke. Ọ nwere mkpụrụ obi (mmetụta uche na echiche) na ọ dị ndụ na a anụ ahụ nkịtị.
Na-acha ọcha ma ọ bụ nwa anụ na ọtụtụ ndị na-mgbe ngwa mata bụ nnọọ a ụlọ ebe anyị bi. M bụ nwa, ikekwe gị bụ nwa. Kọwaa ndị mmadụ site na agba nke ha “ụlọ” dị ka ikpe ikpe ndị dị na nke a akwụkwọ ozi si anya nke envelopu. Ihe mere ha na-ekwu “ya ẹbụk izu ike” bụ n'ihi na ị bụghị gị ahu, kama ị na-ebi ya. Ọ bụrụ na anyị niile na-ekele eziokwu ndị a, e nwere ga-abụ ihe ọ bụla agbụrụ ma ọ bụ na agba mbipụta. Chineke bụ okike, ọ maara na nke a n'ụwa bụ ya kwaaji, na ọ na-apụghị agba ya niile na-acha ọcha, ma ọ bụ niile black. Mma nke art bụ na ngwakọta nke agba, bụghị nanị otu. Nke ahụ bụ kpọmkwem ihe mere anyị kwesịrị usọrọ ibe mba kama ranting banyere anyị dị iche iche. A achicha nwere ezigbo ego nke ọtụtụ Efrata tinyere akwa, nnu, sugar, etc. Mgbe ha na-blended na na butere, anyị na-enweta ezi achicha nke na. Gbalịa itinye nnu, sugar, mmanụ, na àkwá n'ọnụ gị tupu mmiri na eleghị anya ị ga puke gị ikike idi si!
N'ihi ya, ma gị nwunye / di bụ odo, ọcha, green ma ọ bụ ihe ọ bụla bụ ihe ọ bụla ọnụ ahịa ụka. The ebe bụ ma y'all chọta a njikọ na y'all eche bụ uru edebe ihe niile ndụ unu. oge. Eji m obi m na-eche na ndị na-segriget na ndabere nke mba ndị bụ obere kpọrọ, na ha apụghị ịhụ dum (spirit, mkpụrụ obi ma ahụ).
Biota Macdonald • Ka 14, 2018 na 10:34 pm • zaghachi
N'anya na ị dere banyere nke a! M na-esighị n'otu agbụrụ alụmdi na nwunye m, na na ọtụtụ ụzọ m nwee ike ikwu na a ọtụtụ ihe ị na-akọrọ.
Triola Dulaney-Ndiaye • August 20, 2018 na 12:54 Abụ • zaghachi
Ndị mmadụ na echiche ha! Unu na-adị ndụ n'ihi na Chineke! Ị nwere a mara mma ezinụlọ!
RealityCheck • September 8, 2018 na 7:41 Abụ • zaghachi
Chaị, m na-acha ọcha na i nwere ike na-adịghị ọbụna izute a ezigbo nkịtị ọcha nwaanyị taa.
Verena • September 9, 2018 na 7:00 Abụ • zaghachi
First oof niile Ι chọrọ sayy oké blog! na
nwere a quicқ ajụjụ nke na m ga-achọ ịjụ ma ọ bụrụ na үou
letuo. M bụ curio ᥙ ѕ chọpụta hоw ị banyere yourѕelf na anya gị n'uche pгior ka ide.
M һave nwere a siri ike oge ekpocha m thoughfs na na echiche m si.
M n'ezie na-enwe writіng Otú ọ dị ya nnọọ na o yiri ka tһe firet 10 oke 15 nkeji na anyị ᥙ mmekorita efu juist agbalị Fi ց urfe outt otú amalite. Ihe ọ bụla echiche ma ọ bụ mma?
aha: Ụmụ nwanyị Maka opi na ndị oji na-ahụ ha n'anya – Alụmdi na Nwunye Ọlụlụ
Jill • February 10, 2019 na 7:36 Abụ • zaghachi
Na-eji ihe kpatara ya eme ihe ị na-eme mgbe niile.
Erma • Ka 2, 2019 na 12:48 pm • zaghachi
Ọtụtụ ndị mmadụ na-achọ ihe pụrụ iche maka ha, ma ọ bụ naanị
ihe na-adịghị mma ma ọ bụ pụrụ iche.
ọkàiwu ịgba alụkwaghịm • June 19, 2019 na 1:59 Abụ • zaghachi
Ọ na-ewute gị ma m na-ehota ole na ole n'ime posts gị ogologo oge
Ana m enye kredit na isi mmalite na saịtị gị?
Blọọgụ m dị n'otu mpaghara mmasị dị ka nke gị na ndị ọbịa m
ga-erite uru n'ezie site n'ọtụtụ ozi ị na-enye ebe a.
Biko mee ka m mara ma nke a dị gị mma. ekele!
nke nwanyi • August 2, 2019 na 3:14 pm • zaghachi
kwọ, isiokwu a dị mma, nwanne m nwanyi na-enyocha ihe ndia
ihe, otu a ka m ga-esi gwa ya.